Tatitra momba ny kaonty amin'ny kaonty
Ny tatitry ny kaonty FXCC dia mampiseho ny fivarotana rehetra natao tamin'ny kaonty ara-barotra nandritra ny fotoana maromaro. Ohatra; Ny varotra rehetra (arak'izay) entin'ny mpividy / miditra an-tsena, ny vidin'ny baolina tsirairay, ny fifandanjana kaonty amin'ny fotoana iray manokana ary ny fifandanjana mandroso isaky ny hetsika tsirairay ao amin'ny kaonty.
Ny sandan'ny valin'ny kaonty mpanjifa, izany dia ahitana ny fitambaran'ny vola (vola be loatra napetraka / sisa tavela ao amin'ny kaonty) ary ny fiovana rehetra vokatry ny: tombom-barotra sy fatiantoka avy amin'ny toerana efa misy sy mihidy, vola ary vola avy amin'ny famoahana isan'andro, miaraka amin'ny fiampangana avy amin'ny asa toy ny: fanolorana, saram-pandefasana, na saram-bola mifandraika amin'ny banky, raha toa ka azo ampiharina ny saram-pitsaboana.
Tetibolam-pifanakalozam-bola mifehy ny banky foibe Ny vola nasionaly dia "nokolokoloina" (faranana) mankany amin'ny vola lehibe (vola matanjaka toy ny dollar na Euro). Ny ohatra iray vao haingana dia ny peg amin'ny franc Swiss amin'ny euro. Azo atao ny manitsy ny fantsom-bokatra, amin'ny ankapobeny ho fanatsarana ny toerana maha-mpifaninana ao amin'ny firenena amin'ny tsena fanondranana.
Ny Index Movement Indexing (ADX) dia natsangana ho endri-barotra hanamafisana ny tanjaky ny fandrosoana amin'ny alàlan'ny fandrefesana ny fihenam-bidy amin'ny làlana tokana. Ny ADX dia ampahany amin'ny rafi-pitantanana Directional Movement noforonina sy navoakan'i J. Welles Wilder ary ny salanisa vokatr'ireo mpitari-dàlana Directional Movement.
Mifandray amin'ny FXCC Customer Agreement izany. Ny mpanjifa rehetra dia tsy maintsy mamaky sy manaiky ny fepetra ara-barotra amin'ny alalan'ny sonia (elektronika raha ilaina) ny FXCC Customer Agreement, alohan'ny hanokafana kaonty amin'ny FXCC.
Ny sehatra varotra FXCC.
Ity dia interface iray ahafahana programa rindrambaiko mifandray amin'ny programa rindrambaiko hafa. Raha mikasika ny varotra forex, ny API dia manondro ny interface, izay manome sehatra iray hampifandray ny tsena Forex. Ny API dia ahitana sombin-javatra fampandrosoana mamela ny fizarana vaovao, toy ny: fotoana fividianana ny vidin-toeran'ny fotoana sy ny baikon'ny varotra / fanatanterahana.
Ny lanjan'ny vola dia mitombo, na manamafy orina, ho setrin'ny fandrosoana ara-toekarena ary noho izany ny fanodikodinam-barotra.
Teny iray ampiasaina izany rehefa mivarotra sy mividy fitaovana ara-bola mitovy (na mitovy) amin'ny mpivarotra ho an'ny mpivarotra ny tanjona amin'ny tombony amin'ny vidin'ny vola sy / sy ny hetsika vola.
Ny vidin'ny vola, na fitaovana atolotra ho an'ny FXCC, na antoko hafa. Ny fangatahana na ny vidin-tsolika dia ny vidin'ny mpanjifantenaina dia haverina rehefa miezaka ny mividy na maharitra toerana izy.
Izay tsara rehetra manana tombam-bidy fototra.
ATR; eo ho eo tena isan-karazany
Ny mari-pamantarana True True Range (ATR) dia mandrefy ny haben'ny vanim-potoana eo ambany, ary manamarina ny elanelana amin'ny faran'ny vanim-potoan'ny varotra teo aloha.
Mpanolo-tsaina azo ekena sy marika famantarana / iraisana iraisam-pirenena, ho an'ny mpivarotra AUD / USD.
Ity dia antoko fahatelo izay manolotra mpanjifan'ny varotra an-tserasera, na manolotra ny kaonty amin'ny kaontin'ny mpanjifa. Ny FXCC dia tsy manaiky na manaiky ny fomba fiasan'ny solontenam-panjakana nomena alalana na amin'ny fomba hafa. Noho izany, ny FXCC dia tsy mandray andraikitra amin'ny fitondran'ny solontenam-panjakana.
Izany dia tetikady ara-barotra izay nametrahana ny baiko napetraky ny rafitra, na ny programa, izay matetika antsoina hoe mpanolo-tsaina manam-pahaizana na EAs, raha manohitra ny mpanjifa manangana ny varotra / baiko eny amin'ny tsena amin'ny alàlan'ny sehatra. Ny fividianana na fivarotana ny baiko dia atolotra amin'ny tsena amin'ny alalan'ny fandaharam-potoana hamonoana azy raha toa ka mahafeno ny fepetra napetraky ny mpivarotra.
Izy io dia maneho ny vola miditra izay aloa amin'ny mpiasa isaky ny ora iray volana.
Ny departemantan'ny bureau FXCC dia miandraikitra ny fananganana kaonty, ny vola dia mandefa ny kaontin'ny mpanjifa, ny olana momba ny fampihavanana indray, ny fanontanian'ny mpanjifa ary ny hetsika hafa rehetra amin'ny ankapobeny mikasika ny asa izay tsy midika mivantana ny fividianana, na ny fivarotana mpivarotra vola.
Izany fomba izany dia ny fitsapana ny paikady ara-barotra amin'ny fampiasana angon-drakitra ara-tantara mba hanamafisana fa ny fiainana ara-barotra dia azo atao, mba hisorohana ny fivarotana varotra ny kapitalin'ny mpivarotra.
Izany fanambarana izany dia mamintina ny fahasamihafana eo amin'ny sandam-bola eo amin'ny fandoavam-bola amin'ny firenena iray mandritra ny fe-potoana voafaritra. Antsoina koa hoe mandanjalanja ny fandoavam-bola iraisam-pirenena izy io satria mampiditra ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny mponina sy ny tsy fisian'ny firenena.
Fifanakalozam-barotra, na fifandanjana ara-barotra
Ny fahasamihafana eo amin'ny fanondranana ny firenena sy ny fanondranana azy mandritra ny fotoana voafaritra. Izy io koa no ampahany manan-danja indrindra amin'ny kaontin'ny firenena ankehitriny. Raha toa ny firenena iray mandroso sarobidy kokoa noho ny entana, dia manana tontalin'ny varotra ny firenena, ary ny mifanohitra amin'izany, raha misy firenena iray lavitry ny fihenan'ny varotra (varotra varotra), dia hihena ny vola amin'ny mpivarotra varotra, na mampihena ny vidim-panafody, lafo kokoa ny vidin'ny entana sy ny fanondranana ny varotra ho an'ny mpivarotra varotra.
Banky ho an'ny fonenana iraisam-pirenena (BIS)
Fikambanana ara-bola iraisampirenena izay mampiroborobo ny fiaraha-miombon'antoka banky foibe amin'ny tanjon'ny fampiroboroboana ny fahamarinan-toerana sy ny fizarana vaovao eo amin'ireo banky foibe manerantany. Ny tanjona iray hafa dia ny ho foibe fototra amin'ny fikarohana ara-toekarena.
Voafaritra ho tsenam-barotra omen'ny banky ho an'ny mpanjifa, io dia antsoina matetika hoe "andalana".
Andro Banky (na Andron'ny raharaham-barotra)
Ny andron'ny Banky no andrin'ny banky. Tafiditra ao anatin'izany ny andro rehetra izay nisokafan'ny birao amin'ny banky ho an'ny orinasam-panjakana, izay ahitana ny raharaham-barotra rehetra ao amin'ny orinasa. Amin'ny ankapobeny dia ny andron'ny banky dia ny andro Sabata, ny alahady ary ny fialantsasatra ara-dalàna.
Ny banky foibe any Japon.
Azo ampiasaina ho toy ny vola mitovy izy ireo ary taratasy iray izay avoakan'ny banky foibe ho karazana fitaovana azo ampiharina (fanamarihana tsy manara-dalàna), izay azo alaina amin'ny tompon'ny fangatahana.
Ny tahan'ny zanabola mifototra amin'ny hoe ny banky foibe dia mandefa vola amin'ny rafitra banky anatiny.
Io no antsoina hoe vola voalohany amin'ny mpivarotra vola. Ny vola fototra ihany koa dia ny vola ampiasain'ny mpampiasa vola (mpanome), ny kaonty bokiny. Ao amin'ny tsena FX, ny US dollar dia heverina ho toy ny vola fototra ho an'ny ankamaroan'ny teny fx; Ireo teny nalaina dia nambara ho singa iray amin'ny $ 1 USD, mifanohitra amin'ny vola hafa voatanisa ao amin'ny mpivady. Ny tranga tamin'ity fivoriambe ity dia ny Pound Britanika, ny Euro ary ny Australian Dollar.
Ny tahan'ny fototra dia ny tahan'ny zanabola izay ny banky foibe, toy ny Bank of England na ny Federal Reserve, dia hamoaka vola amin'ny banky ara-barotra. Ny fandaniam-bola mety hampidi-bola dia handoa vola kely amin'ny taham-pahaizana, ny latsaky ny vidin-tsolika sasany dia handoa ny taham-pivoarana bebe kokoa, ambonin'ny tahan'ny tahan'ny.
Iray isan-jato amin'ny iray isan-jato. Ohatra; ny fahasamihafana eo amin'ny 3.75% sy 3.76%.
Ny vidiny amin'ny fandaniana isan-taona amin'ny fiverenana na amin'ny fe-potoana matotra fa tsy ny vidin'ny vola.
Ny tsenan'ny fivarotana dia toe-tany misy toerana misy ny vanim-potoana maharitra (amin'ny ankapobeny) ny vidin-tsolika ho an'ny vokatra fampiasam-bola manokana.
Ny fiovana eo amin'ny tsenan'ny toeram-pivarotana izay ny mpampiasa vola sy / na mpivarotra, izay fohy amin'ny vokatra fampiasam-bola, dia tsy maintsy mividy fampiasam-bola amin'ny vidiny ambony kokoa noho ny fivarotana azy, raha tsy izany dia hampihena ny fahaverezan'ny vidiny bola, na ny varotra manokana / s. Ny famoahana biriky dia mety ho hetsika iraisam-pirenena noforonina tao amin'ny tsenan'ny fampiasam-bola, matetika amin'ny banky foibe na mpandraharahan'ny tsena.
Mpampiasa vola iray izay mihevitra fa ny vidin'ny vokatra fampiasam-bola dia hianjera.
Ny Boky Beige dia anarana ampiasaina matetika ho an'ny tatitra momba ny Fed, navoaka mialoha ny fivorian'ny FOMC momba ny tahan'ny zanabola. Afaka amin'ny valo (8) ho an'ny daholobe mandritra ny herintaona.
Ny vidin'ny FXCC (na antoko mpanohitra iray hafa) dia manolotra ny mpivarotra vola amin'ny mpanjifa. Izy io no vidin'ny mpanjifa izay notononina raha te hivarotra (fohy) toerana.
Ny fahasamihafana eo amin'ny vidim-bidiny sy ny fangatahana vidiny.
Miteny araka ny tokony ho izy ny roa na telo isa amin'ny vidin'ny vola. Ohatra; Ny tahan'ny fifanakalozana EUR / USD amin'ny .9630 dia midika hoe '0' ho endrika voalohany. Noho izany, ny vidiny dia 0.9630, miaraka amin'ny "big figure" izay 0.96.
Sari-tany ara-teknika izay manatsara ny tsy fanjarian-tsakafo, noforonin'i John Bollinger. Izy ireo dia mamaritra famaritana mazava ho an'ny avo sy ambany, izay ahafahantsika mahita ny vidin'ny avo indrindra ao amin'ny tarika ambony ary ambany ambany amin'ny tarika ambany.
Break, na miala
Ny fivoahana dia teny iray ampiasaina hamaritana tampoka, haingana (na hianjera) haingana amin'ny vidin'ny fitaovana iray mankany amin'ny fiatoana amin'ny alàlan'ny fanohanana na ny fanoherana.
Fifanarahana Bretton Woods an'ny 1944
Ity dia fifanarahana tamin'ny WWII izay nahatonga ny tahan'ny fifanakalozana sy ny vidin'ny volamena. Ny fifanarahana dia natao teo amin'ireo solontena avy amin'ny firenena samihafa mahaleo tena misolo tena ny toekarena manerantany.
Mpanafatra, toy ny FXCC, izay manatanteraka ny baiko hividy sy hivarotra vokatra ara-bola, toy ny: vola sy fitaovana mifandraika hafa, na ho an'ny komisiona, na ny tombom-barotra.
Fametrahana (Fahazoan-dalana) Fahazoan-dalana
Ny isan'ireo fananganana fananganana fananganana vaovao natolotry ny governemanta na ny vondron'orinasa hafa, alohan'ny hanombohan'ny fananganana marina dia afaka manomboka ara-dalàna.
Fotoana lava amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny vokatra fampiasam-bola manokana.
Mpandraharaha iray izay mino fa ny vidin'ny famokarana manokana dia hitsangana.
Ny Banky Foiben'ny Alemana.
Isan'andro rehefa manokatra orinasam-barotra ny banky ara-barotra, ankoatra ny Sabotsy na Alahady, ao amin'ny foibe ara-bola lehibe indrindra ao amin'ny firenena.
Ordinatera iray ahitana torolàlana manokana hanatanterahana trosam-bola iray hividianana trano amin'ny vidiny voafaritra na ambany. Tsy azo ampiasaina izany raha tsy eo ny vidin'ny tsena (na ambany) ny vidin'ny fetra. Ny vidin'ny fividianana fandefasana indray mandeha, dia lasa loka ara-barotra mividy amin'ny vidin'ny tsena ankehitriny.
Ny fividianana fandefasana dia baikon'ny fandefasana izay napetraka mihoatra noho ny fandefasana ny vidin-tsolika amin'izao fotoana izao, dia tsy azo ampiasaina izany raha tsy misy ny fangatahana vidin-tsarimihetsika (na ambony) ny vidin'ny fijanonana. Ny fividianana ny fividianana fandefasana indray mandeha, dia lasa loka ara-barotra mividy amin'ny vidin'ny tsena ankehitriny.
Ity no teny ampiasaina amin'ny tsena fifanakalozana vola amin'ny tahan'ny USD / GBP.
Karazana tabilao misy loko mitovy amin'ny endriky ny labozia. Maneho ny avo sy ny vidiny ambany izy, ary koa ny vidin'ny fanokafana sy famaranana.
Ny sandam-bola izay voarakitra na voarara amin'ny kaonty amin'ny fitazonana mpivady vola izay tsy mitovy ny tahan'ny latsaky ny lanjany.
Amin'ny resaka fifanakalozana Forex, ny varotra entina dia tetikady izay ahafahan'ny mpampindram-bola mandoa vola amin'ny vidiny ambany, mba hividianana amin'ny vola izay mety hanome fiverenana avo kokoa. Ity tetika ity dia mahazatra eo amin'ny tsena fifanakalozana vahiny, raha toa ny fisondrotan'ny banky indostrialy.
Ity ihany no fametrahana ny adidy aman'andraikitra.
Raha mikasika ny fifanakalozana fifanakalozana natokana tamin'ny andro nanaovana ny fifanarahana.
Ny vola amin'ny taham-bola dia mifanaraka amin'ny habetsaky ny vola napetraka ao amin'ny kaonty, amin'ny fijerena ny plus na minus amin'ny toerana efa tadidy, ny tombony sy ny fahaverezana, ary koa ny fanomezana hafa, na ny credits, toy ny rollovers, ary ny komisiona (raha misy azo atao).
Ny Index Commodity Channel Index (CCI) dia mampitaha ny vidiny midadasika amin'izao fotoana izao eny an-tsena miaraka amin'ny vidiny midadasika hita eo ambonin'ny fenitry ny 20.
Banky iray, izay tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny politikan'ny volam-pirenena na an'ny faritra. Ny Federal Reserve dia banky foibe ho an'i Etazonia, ny Banky Foiben'ny Eoropeana no banky foiben'ny Eorôpa, ny Bank of England no banky foibe any Angletera ary ny Bank of Japan no banky foibe any Japon.
Fanelanelanana ao amin'ny Banky Foibe
Ny hetsika izay misy banky foibe na banky foibe miditra an-tsena ny fifanakalozana vola vahiny amin'ny fiezahana hanodinana ny famatsiana sy ny fangatahana tsy azo ovaina, amin'ny fividianana mivantana (na fivarotana) fifanakalozana vahiny.
Ny Komity Trading Trading Commodity Futures, ity no masoivohon'ny federaly amerikana momba ny fidiram-bola any amin'ny tsenam-barotra, anisan'izany ny fidiram-bola ara-bola.
Ny teny ampiasaina raha toa ka misy loko roa mifanaraka (fanohanana sy fanoherana avo lenta) mandritra ny fe-potoana voafaritra.
Ity dia heverina ho olona iray izay mandalina ny mombamomba ny sary sy ny sarin'ireo antontan-kevitra ara-tantara, mba hanandramana hamaritana ny fironana, na ny hetsika fihenam-bidy, izay hanampy haminavina ny tari-dalana sy ny volatility amin'ny vokatra fampiasam-bola manokana. Izany dia karazan'ny mpandalina ara-teknika.
CHF ny fividianana franc franc, ny vola an'i Soisa sy Liechtenstein. Ny franc Swiss dia antsoina hoe "Swissie" avy amin'ny mpivarotra vola.
Fandaniam-bola azo omena, vokatry ny fametrahana varotra, na varotra.
Client na Customer
Mpifanaraka amin'ny FXCC. Ny client, na tompona kaonty, dia mety: olona, ​​vola mpitantana, orinasa, orinasam-pitokisana, na antokon-dalàna izay mahaliana ny lanjany sy ny fahombiazan'ilay kaonty.
Ny toerana voafetra dia manondro ny toerana tsy misy intsony satria nandao ny tsena ny mpivarotra noho ny fahamendrehany. Ohatra, ny toeram-pivarotana dia tsy maintsy manohintohina ny toeran'ny mividy ary ny mifamadika amin'izany.
Ny karaman'ny mpampindram-bola toy ny FXCC dia afaka mandefa ny varotra tsirairay.
Misy karazana forex ananko telo izay ahitana vala avy any amin'ireo firenena izay manana tahirin-tsakafo maro / harena voajanahary voajanahary. Ny mpivarotra dia: USD / CAD, USD / AUD, USD / NZD. Ireo mpivarotra entana dia mifamatotra amin'ny fiovan'ny vidin'ny entana. Ny mpivarotra mikaroka ny fanamafisana ny varotra entam-barotra, matetika dia manantena ny hivarotra ireo mpivady.
Dokam-barotra elektronika na vita pirinty nozarain'ny mpanaraka izay mamaritra ny antsipiriany rehetra momba ny fifanakalozam-bola.
Ny fanamafisana dia fehezanteny iray ampiasaina hamaritana ny vanim-potoana iray izay tsy dia misy dikany loatra ny vidiny ary mihetsiketsika any aoriana.
Ny fepetra momba ny fanamafisana ankapobeny manodidina ny toe-bola ara-bola ao anatin'ny toe-karena sy ny toe-bolan'ny mpanjifa manokana.
Ity dia voafaritra ho ny isam-bolana amin'ny fiovan'ny lozam-pako amin'ny vidin'ny entona mpanjifa, matetika: ny sakafo, ny akanjo, ary ny fitaterana. Ny firenena dia miova arakaraka ny fomba fisainany sy ny fisokafany.
Ny fampandrosoana dia teny ampiasaina matetika raha toa ka antenaina fa hanitatra ny fizotrany ny fironana.
Ny fifanarahan'ny OTC (Over the Counter) natao tamin'ny FXCC mba hividy na hivarotra volavolan-dalàna iray manokana, ho an'ny volavolan-dalàna iray hafa, izay ametrahana ny fametrahana amin'ny datim-pifidianana voamarina (amin'ny ankapobeny ny datin'andro). Ny tahan'ny fifanakalozana vahiny izay tsy maintsy ampifanarahana ireo antoko roa ireo dia hamaritra ny isa mifanentana.
Ny taham-pahaizana ampiasaina hanovàna dolara ara-drariny manokana amin'ny dolara amin'ny dollar, amin'ny faran'ny andro varotra.
Vola iray izay azo alaina maimaim-poana amin'ny vola hafa tsy misy faneriterena. Amin'ny ankapobeny dia mifamatotra amin'ny toekarena misokatra sy miorim-paka izy ireo, ary ny vidiny dia voafaritra araka ny fikarakarana sy ny fangatahana amin'ny tsenam-bola vahiny.
Hetsika fihodinana izany ary ampiasaina ny fepetra mba hamaritana ny fihenan-tsakafo mandritra ny fivoahan'ny ampahany iray amin'ny fironana iray.
Ny solontenan'ny banky vahiny iray, izay manome tolotra amin'ny anaran'ny orinasa iray hafa, izay tsy misy sampana ao amin'ny foibe ara-bola, ohatra; mba hanamora ny famindrana ny vola na ny fitondrana transakta raharaham-barotra.
Ny vola faharoa amin'ny mpivarotra vola. Ohatra; Ao amin'ny EUR / USD ny vola currency, ny vola currency dia USD.
Olona iray na bank iray izay mandray anjara amin'ny fifanakalozana ara-bola iraisam-pirenena ary izy no mpandoa-trosa fifanekena toy ny fampindramam-bola.
Izany dia manondro ny mety hisian'ny firenena handanjalanja na hampisy fiantraikany amin'ny sandan'ny vola. Ny vidin'ny fetra amin'ny fividianana fetra farany dia tokony ho mihoatra ny vidin'ny fanontana amin'izao fotoana izao dia ny fijerena ireo singa ara-toekarena, ara-politika ary ara-jeografika ao amin'ny firenena iray manokana, mba hamaritana ny fahamarinan-toerana ankapobeny.
Manaova fifampiraharahana iray izay manidy toerana iray farany.
Ity koa dia antsoina hoe "fihantsiana mihetsika". Ity dia faritana amin'ny hoe ny tahan'ny fifanakalozam-bola amin'ny firenena iray dia napetraka, amin'ny fifandraisany amin'ny vola hafa.
Fifanakalozana vola amin'ny fifanarahana
Fifanakalozam-pahatsiarovana na tsenam-bola vahiny iray, ho takalon'ny vola vahiny hafa. Ny fifanakalozana vola dia tsy ny US dollar.
Vola tsy misy ny USD.
Ny taham-pifanakalozana eo amin'ny vola roa, na izany dia tsy ny vola ofisialin'ny firenena ary ny roa dia voambara amin'ny volany fahatelo.
Ny Cryptocurrencies dia dizitaly, virtoaly virtoaly mampiasa cryptography ho an'ny fiarovana ny transakta. Satria tsy avoakan'ny banky foibe, na ny governemanta, dia lazaina fa natiora organika izy io, izay mahatonga azy io ho tsy misy dikany amin'ny fitsabahan'ny governemanta, na ny fanodikodinana, toy ny Bitcoin.
Ny metaly na ny fitaovana taratasy, raha ny fampiasana na ny fampielezana tena izy, ho toy ny fifanakalozan-dresaka, ny famoahana banky sy vola madinika manokana.
Matetika no ampiasaina mba hampihenana ny mety ho fanodikodinam-bola ny volam-pandaminana, ary lazaina ho toy ny fifantenana ny vola ampiasain'ny salasalany ny sobika mba handrefesana ny sandan'ny fanoloran-tena.
Izany dia programa elektronika ampiasaina amin'ny fiovan'ny vola; kalko iray izay manova ny sandan'ny vola iray ho amin'ny sandan'ny vola hafa. Ohatra; dolara ho an'ny euro. Ny mpampiofana dia tokony hampiasa ny tsenan-tsoratra farany indrindra azo jerena ao amin'ny tsena fifanakalozana vahiny.
Ny safidimam-bola dia manome ny mpividy ny zo, fa tsy fanoloran-tena, hanakalozana vola be ho an'ny vola voatanisa amin'ny vola tokana ho an'ny hafa amin'ny vidin'ny faktiora amin'ny daty voatondro.
Voafaritra ho roa vola amin'ny fifanakalozam-bola vahiny. Ny 'EUR / USD' dia ohatra iray amin'ny mpivady vola iray.
Ny mety hitrangan'ny fahasamihafana eo amin'ny fifanakalozana.
Ireto ny taratasy famantarana telo nosoratanan'ny ISO (Organisation Internationale pour standardisation) ary matetika ampiasaina amin'ny toerana misy ny anaran'ny vola feno. Ohatra: USD, JPY, GBP, EUR, ary CHF.
Ny vola midika indrindra amin'ny sendikà dia Eurozone. Ny fifanarahana eo anelanelan'ny firenena roa na maromaro no hizara vola (na fanonganam-panjakana), mba hitazonana ny fifanakalozam-bola mba hitazonana ny sandan'ny volany amin'ny sehatra iray manokana. Ny mpikambana ao amin'ny sendika ihany koa dia mizara politika tokana monetary sy vahiny.
Fampiharana ny kaonty mpanjifa
Ny dingan'ny fangatahana FXCC izay tokony hamita sy hanaiky ny mpanjifa rehetra amin'ny fanekena ny FXCC, alohan'ny hanaovana raharaham-barotra.
Daily Cut Off (akaiky ny andro fiasana)
Ity no teboka tokana amin'ny fotoana, mandritra ny andro fiasana iray manokana, maneho ny fiafaràn'ny andro fiasana. Ny daty handraketana ny fifanekena rehetra aorian'ny fanesorana isan'andro, dia heverina ho novonoina tamin'ny andro fiasana.
Mividy na mivarotra baolina fa raha tsy atao amin'ny andro voafaritra, dia avy hatrany dia nofoanana tanteraka.
Miresaka momba ny varotra iray izay nosokafana sy nikatona izany andro izany.
Ireo mpitsikilo sy mpivarotra izay maka toerana amin'ny vokatra fampiasam-bola, izay avy eo novaina talohan'ny fifaranan'ny andro famaranana, dia faritana ho mpivarotra andro.
Ny mpivarotra dia mety maniry ny mitazona firaketana ireo rakitra rehetra natao nandritra ny fotoana voafaritra. Ny fifanarahana manokana momba ny fifamoivoizana dia ahitana ny fanazavana fototra mifandraika amin'ny raharaham-barotra. Ny mpivarotra amin'ny sehatra fifanakalozam-bola dia mety ahitana ny fampahalalam-baovao toy ny fanokafana sy famaranana ny lozam-pifamoivoizana, natombok'ilay mpivarotra.
Io no daty izay nanaovan'ny fifanarahana.
Ny tsena Forex dia misokatra 24 / 5, noho izany dia maro ireo rafi-pitantanana no miandraikitra lohahevitra amin'ny toerana samihafa. Ny latabatra fandrafetana koa dia hita any ivelan'ny tsenan'ny vola; any amin'ny banky sy ny orinasa mpitrandraka, mba hampiharana ny varotra amin'ny sehatra maro. Ny fametrahana latabatra amin'ny orinasa broker, rehefa manakarama forex ho mpivarotra antsinjarany, matetika mametraka ny teniny manokana ary miely rehefa manolotra varotra forex ho an'ny mpanjifany, fa tsy mifanaraka amin'ny fampidinana mivantana ny tsena, na dia, ohatra, mahitsy amin'ny fomba fanodinana.
Io no fomba voalohany indrindra hanoratanao ny antontam-baovao fototra mifandraika amin'ny trosa ara-bola rehetra.
Ny olona (na ny orinasa) miasa amin'ny maha-talen'ny tena, fa tsy amin'ny maha-mpanelanelana azy, amin'ny fifanakalozana fifanakalozana vahiny (mividy na mivarotra). Ny mpivarotra no manao tombony ho an'ny tombontsoany, manondrana ny kaontiny manokana ary mandray ny tenany manokana.
Ity dia voafaritra ho ny fitotongan'ny fifanarahana ara-bola.
Fifandanjana ara-barotra amin'ny varotra.
DEMA, (avo roa heny)
Noforonin'ny manam-pahaizana Patrick Mulloy, ny dual exponential Moving Average (DEMA) dia manandrana manome ny salan'isa mahalavorary amin'ny alàlan'ny fametrahana metodôla haingam-pandeha haingana kokoa, mety amin'ny latsa-danja kokoa noho ny avo lenta mampihetsi-po. Ny karajia dia sarotra kokoa noho ny mahazatra.
Lasa fihenam-bidy ny sandan'ny vola amin'ny vola hafa, noho ny herin'ny tsena.
Ny halalin'ny tsena
Izany no lanjan'ny habetsaky ny habetsahana ary ny endriky ny liquidity azo ampiasaina amin'ny teti-pivarotana ho ohatra (ohatra ho) mpivady vola manokana, amin'ny fotoana voafaritra manokana.
Raha mikasika ny fifanakalozana ara-barotra dia ny fampahalalam-baovao ilaina amin'ny fanatanterahana ny fifanakalozam-bola vahiny, ohatra; anarana, tahiry, ary daty.
Ny devaluation dia fialan-tsasatra amin'ny alàlan'ny volan'ny firenena iray: vola hafa, vondron-bola, na ho an'ny fenitra. Ny devaluation dia fandaharan'asa politika vola ampiasain'ny firenena izay manana tahan'ny fifanakalozana, na farafahakeliny amin'ny fifanakalozam-bola. Ny devaluation dia ampiharina amin'ny governemanta sy ny banky foibe mamoaka vola. Mety handany ny volany ny firenena, ohatra, miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo.
Ity dia endrika noraisina ho tamba-jotra sy ny fanolorana manokana ny fandaniana manokana.
Ny fahasamihafana dia mety ho tsara na ratsy ary siantifika ny fiovan'ny fironana hetsika.
Deutsche Mark. Ny vola Allemagne teo aloha talohan'ny nanoloana azy amin'ny euro.
DMI, mari-pamantarana fizotran'ny fitiliana
Ny Indikatram-Movement Directional Movement (DMI) dia singa ao amin'ny rafitra fanondroana ny Fikirakira ny Directional Movement, noforonina sy navoakan'ny mpanorina ny endriky ny varotra, J. Welles Wilder. Izy ireo dia voaisa miaraka amin'ny Index Movement Average (ADX). Indikativa roa no tadiavina, DI (Positive DI) sy DI negatif (-DI).
Ny fanaovan-jiro izay mamoaka rehefa mihidy sy manaka ny vidiny dia mitovy. Izy io dia maneho fiheverana goavana eo amin'ny avo sy ambany, saingy farafahakeliny eo amin'ny vidin'ny varavarana misokatra sy ny famaranana ary toy ny lakroa na lakroa mivaivay.
Ny tahan'ny dolara dia faritana amin'ny tahan'ny fifanakalozam-bola amin'ny vola iray manokana amin'ny dollar (USD). Ny ankamaroan'ny tahan'ny fifanakalozana dia mampiasa ny dolara ho toy ny vola fototra sy vola hafa tahaka ny vola vahiny.
Izany dia faritana amin'ny fampindramam-bola azo ampiharina amin'ny fametrahana, na fampiasam-bola amin'ny firenena misy azy.
Ny teny ampiasain'ny solotenan'ny FXCC mba hampisehoana fa nisy ny fifanarahana teny an-tsokosoko ary ankehitriny ny fifanarahana.
Ampiasaina amin'ny fanadihadiana ara-teknika ho toy ny sariohatry ny tabilao izay mety manondro ny mety hitrangan'ny hetra amin'ny hoavy
Ampiasaina amin'ny fanadihadiana ara-teknika ho toy ny endrika fananganana sary izay mety manondro ny hetsi-panoheram-barotra ho avy.
Dovish dia manondro ny fihetseham-po na ny tononkalo ampiasain'ny banky afovoan-dàlana manandratra ny toe-karena ary tsy azo atao ny mandray hetsika mahery vaika momba ny fiakaran'ny vidim-piainana.
Fampandrenesana ara-toekarena mitaratra ny baiko vaovao izay napetraka tamin'ireo mpanamboatra tompon-tany amin'ny fotoana fohy. Izy io dia mandrindra ny tanjaky ny famokarana ary manampy ny mpampiasa hahafantatra ny fironana eo amin'ny fitomboan'ny toekarena.
Nofantenana ho toy ny hetsika nataon'ny banky foibe, miaraka amin'ny fikasana hanatsarana ny vola fanampiana, mba hamporisihana ny asa ara-toe-karena, indrindra amin'ny famporisihana ny fiakaran'ny vidim-piainana.
Kalandary ampiasaina hanaraha-maso ny fampitomboana ara-toekarena, ny metrika, ny angon-drakitra sy ny tatitra noho ny famotsorana ny firenena tsirairay, ny faritra ary ny orinasa fanadihadiana ara-toekarena tsy miankina. Raha miankina amin'ny fiantraikany eo amin'ny tsenam-barotra, dia avoaka araka ny tokony ho izy ny famoahana angona; Ireo izay naminavina fa hanana ny fiantraikany lehibe indrindra dia voafaritra ho "fiantraikany lehibe".
Ny statistika amin'ny ankapobeny no omen'ny governemanta iray firenena, izay manondro ny fitomboana ara-toekarena amin'izao fotoana izao mahakasika ny famantarana.
Endritsoratra mamaritra ny tanjaky ny vola mifandraika amin'ny harona amin'ny vola hafa. Azo jerena koa izy io ho fanandramana hamintina ny fiantraikan'ny fifanakalozana ara-barotra amin'ny firenena amin'ny fanovana ny vola amin'ny vola hafa.
Fandefasana vola elektronika.
Ny fampitoviana mivezivezy amin'ny fifindra-monina (EMA) dia mampiseho ny vidin'ny vidiny, mametraka lanjany matematika amin'ny vidiny vao haingana. Ny fihenam-bidy ampiharina amin'ny farafara farany indrindra dia miankina amin'ny fe-potoana voafaritra amin'ny salan'isa mahazatra nosafidianan'ny mpampiasa. Ny fohy kokoa ny vanim-potoan'ny EMA, ny lanjany bebe kokoa amin'ny vidin'ny farany indrindra.
Ny Endri-Cost Index (ECI)
Tondro ara-toekarena momba an'i Etazonia izay mandrefy ny tahan'ny fitomboana sy ny fandaniana amin'ny fandaniana amin'ny asa.
Ny endriky ny andro farany (EOD)
Izany dia faritana ho toy ny filaminana hividy, na fivarotana fitaovana ara-bola amin'ny vidiny voatondro, ny lamandy dia mbola misokatra hatramin'ny fiafaran'ny varotra.
Voafaritra ho toy ny toe-javatra mitranga ao amin'ny tsenan'ny Euro Interbank fametrahana, raha samy mitovy ny tolotra sy ny tolotra amin'ny fotoana manokana, dia mitovy.
Electronic Trading Trading
Hivarotra ara-barotra amin'ny kaonty brokerage ao amin'ny Internet. Ny varotra elektronika dia mirakitra ny fiovan'ny vola ho an'ny vola vahiny, amin'ny taham-pivarotana malalaka, amin'ny alalan'ny kaonty brokerage ao amin'ny Internet. Amin'ny alàlan'ny teknolojia fampahalalam-baovao, dia mitondra mpividy sy mpivarotra izany ary mampiasa sehatra ara-barotra elektronika izay mamorona toerana fivarotana virtoaly.
Ity no fifanakalozam-bola tokana an'ny blaogin'ny Union Europe.
Ny banky foiben'ny Vondrona Eoropeana.
Vola Eoropeana (ECU)
Harona iray avy amin'ny volan'ny mpikambana ao amin'ny EU.
Vondrona sendikaly ara-toekarena Eoropeana (EMU)
Amin'ny maha rafitra ny fifandraisana eo amin'ireo mpikambana ao amin'ny Vondrona Eoropeana, dia misy ny fandrindrana ny politika ara-toekarena sy ara-toekarena, ary ny vola iraisana "ny euro.
Izy io dia faritana ho toy ny fifanakalozam-barotra vola izay mandany vola amin'ny vola euro, na mivantana, na amin'ny fomba fampiasam-bola trosa fampiasam-bola ho an'ny fotoana ifanakalozana vola.
Ity ny tahan'ny zanabola voatonona ho an'ny vola Euro nandritra ny fe-potoana voafaritra.
Ny fandaniana Eurocurrency dia vola navoaka ivelan'ny toeram-ponenany avy amin'ny governemanta na orinasa nasionaly. Mihatra amin'ny vola sy banky any amin'ny firenena izany. Amin'ny ohatra; Ny loka Koreana Tatsimo napetraka tamin'ny banky iray tao Afrika Atsimo, dia heverina ho "karakaina ho an'ny eurocent". Antsoina koa hoe "euromoney."
Ny Eurodollars dia faritana amin'ny fametrahana ny fotoana ho an'ny vola amerikana, any amin'ireo banky any ivelan'i Etazonia, noho izany dia tsy tafiditra ao anatin'ny faritry ny Federal Reserve izy ireo. Vokatr'izany, ny tahiry toy izany dia tsy dia manan-danja loatra raha oharina, ohatra, ny fametrahana tahiry tahaka izany ao amin'ny USA
Ny Vondrona Eoropeana (EU) dia vondron'ny firenena 28 izay miasa toy ny blôgy ekonomika sy politika. Ny sivy ambin'ny folo amin'ireo firenena amin'izao fotoana izao dia mampiasa ny euro ho volany ofisialy. Ny tsena iraisam-pirenena Eoropeana dia napetraky ny firenena 12 tao amin'ny 1993, mba hanaraka ireo fahalalahana lehibe efatra; ny hetsika: entana, tolotra, olona ary vola.
Vola be loatra
Vola mitambatra amin'ny FXCC izay tsy ampiasaina ho an'ny maria manohitra ny toerana misokatra efa misy.
Amin'ny fifanakalozana fifanakalozana ara-bola, ny fifanakalozana dia faritana amin'ny ankapobeny ho toerana ara-batana izay ananganana fitaovana ary matetika fehezina. Ohatra: Ny New York Stock Exchange, Chicago Board of Trade.
Ny rafitra napetraky ny governemanta sy ny banky foibe mba hifehezana ny fidiram-bola sy ny fandaniana amin'ny fifanakalozana sy ny fitaovam-pifanakalozan-kevitra vahiny, ka ahitàna ny: famoahana karama, kara-bidy, varotra, fetra, levies ary surcharges.
Ny tetika fifanakalozam-bola dia fiheverana ny sisin-dolara amin'ny fifanakalozana vola - rafitra iray natao hanaraha-maso ny tahan'ny fifanakalozana vola amin'ny vola hafa. Misy fahasamihafana amin'ny tahan'ny fifanakalozam-bola ao anatin'ny sisin-dàlana. Ny fepetra fanodinkodinam-bola dia matetika antsoina hoe rafitra fifanakalozana semi-bola.
Tolo-kevitra momba ny fifanakalozam-bola vahiny ho an'ny vola madiodio sy fifanakalozana. Vola tsy ara-drariny ny vola vahiny ary tsy misy ny halalin'ny tsena, ohatra, ny euro ary noho izany dia varotra vola be lavitra. Ny fifanakalozam-bola any ivelany dia mety ho lafo be lavitra noho ireo teny nindramina - ny fandefasana bidanana / fangatahana, dia mitombo hatrany. Ny exotics dia tsy mora azo atao (na misy) amin'ny kaonty brokerage. Ohatra avy amin'ny volavolan-tsindrim-panafody ny baht Thai sy irakiana.
Izany dia manondro ny mety hisian'ny fifandraisana amin'ny vidin'ny tsena izay mety hitarika tombony na fahaverezana.
Tatitra avy amin'ny fanisam-bahoaka amerikana no manome ny antsipiriany momba ny antontan'isa momba ny famokarana tsy misy maharitra sy maharitra ary ny fepetra noraisina, ny baikon'ny tsy nahazoan-dalana, ary ny fitaovam-pandrafetana avy amin'ireo mpanamboatra ao an-toerana.
Ny hetsika haingana amin'ny vidiny, na ny tahan'ny tsena ateraky ny tsy fitovian'ny fanomezana sy ny fangatahana amin'ny mpanjifa sy / na ny mpivarotra, dia mahafantatra ihany koa ny fepetra ahafahan'ny tsenam-bola ara-bola mahatsara ny volatility, miaraka amin'ny fivarotana mavesatra tsy misy lanjany. Ao amin'ny toe-javatra toy izany, ny vidiny, na ny vidin-javatra, dia mety tsy ho mora amin'ny mpanjifa mandra-piverenan'ny tsena kokoa ny tsena.
Tahan'ny tahan'ny Fed
Ny tahan'ny zanabola iray dia ny fikambanana fandrakofana fandoavam-bola ao amin'ny Federaly Reserve ho an'ny orinasa fandrakofam-pahasalamana hafa mandritra ny alina. Izy io dia ampiasaina hanatanterahana ny politikan'ny vola ary misy fiantraikany amin'ny fiovan'ny vola izay miteraka fiovana eo amin'ny sehatry ny toekarena any Etazonia.
Sasantsasany amin'ny banky amin'ny banky eo ambany fifehezan'ny bankin'ny banky ao an-toerana.
Izany dia famaritana ny Banky Federal Reserve Amerikana.
Federal Open Market Komity
Antsoina koa hoe FOMC. Io no vondron'olona tsirairay izay manapa-kevitra ny amin'ny fomba fiasa ara-politika izay hatao any Etazonia. Ny FOMC dia tompon'andraikitra mivantana amin'ny fikarakarana ny tahan'ny Federal sy ny tahan'ny fihenam-bidy. Ireo tahan'ny roa ireo dia manan-danja amin'ny fanaraha-maso ny fitomboan'ny famatsiam-bola ary ny habetsahan'ny asa ara-toekarena any Etazonia.
Ny biraon'ny Federaly Federaly Reserve, izay notendren'ny filoham-pirenena amerikana amin'ny fe-potoam-piasana 14, dia voatendry ho mpitantana ny iray amin'ny filankevitra mandritra ny efa-taona.
Ny rafitra banky foiben'ny Etazonia, ahitana ny 12 Federal Reserve Banks, mifehy ny distrikan'i 12 amin'ny fanaraha-maso mivantana ny Federal Reserve Board. Ny mpikambana ao amin'ny Fed dia tsy maintsy mandoa vola amin'ny banky natolotry ny Comptroller of Currency ary tsy azo atao ho an'ny banky foiben'ny fanjakana.
Teny iray ampiasaina amin'ny fanadihadiana ara-teknika izay manondro ny fiantohana sy ny fanoherana ny fanitsiana dia mety hitranga alohan'ny hiverenana any amin'ny làlan'ny hetsika goavana indrindra.
Fenoy, na fenoy
Ity dia fifanarahana novonoina tamin'ny anaran'ny kaonty mpanjifa noho ny baiko mpanjifa. Vantany vao vita ny baiko dia tsy azo esorina, novaina, na nolavin'ny mpanjifany.
Io no vidin'ny mpandidy ny handehanany ela na fohy.
Ity dia faritana amin'ny vidin'ny vidiny, natolotra ho setrin'ny fangatahana hetra mafy, izay manome antoka ny fisaorana na fangatahana vidiny hatramin'ny vola voalaza. Izy io dia vidiny ahafahan'ilay antokon'olom-panafana vonona hanao fifanarahana iray, ho an'ny fametrahana toerana.
Ny fampiasana hetra sy / na fanentanana ho fitaovana, ho fampiharana politika.
Ireo dia ny kalandrie isam-bolana mitovy amin'ny toerana. Misy misimisy roa. Ho an'ny famaritana bebe kokoa amin'ny antsipiriany dia jereo ny fanazavana momba ny daty sarobidy
Ity ny tahan'ny ofisialy napetraky ny manampahefana monisipaly. Ny tahan'ny vola avoakany amin'ny vola na vola hafa.
Izy io dia faritana ho fomba iray hamaritana ny taham-bola amin'ny fametrahana taham-pahavitrihana izay mampitombo ny mpividy amin'ny mpivarotra. Ity dingana ity dia miseho indray mandeha na indroa isan'andro amin'ny fotoana voafaritra voafaritra. Ampiasaina amin'ny vola sasany, indrindra amin'ny fametrahana tahan'ny mpizaha tany.
Ny rafitra momba ny Financial Information Exchange (FIX) dia napetraka ao amin'ny 1992 ary sehatra iraisam-pirinty napetraka momba ny fifanakalozam-baovao mifandraika amin'ny fifanakalozam-bola sy ny tsena.
Voafaritra ho tahan'ny fifanakalozan-kevitra izay arotsak'ireo volavolan-tsolika novolavolaina amin'ny famatsiana sy fangatahana miaraka amin'ny vola hafa. Ny vola misoratsoratra dia miankina amin'ny fidiran'ny manampahefana monisipaly. Raha matetika no manao izany asa izany, dia fantatra amin'ny anarana hoe lozaka maloto.
Federal Open Market Komity, dia ny komity ao amin'ny Federal Reserve System ahitana mpikambana 12 izay mametraka ny tanjon'ny politikan'ny vola. Ny fampandrenesana dia mampahafantatra amin'ny vahoaka ny fanapahan-kevitra noraisina momba ny tahan'ny zanabola.
Ny teny hoe "fifanakalozana vahiny" dia manondro ny fifanakalozana ara-barotra amin'ny vola vahiny, tsy misy fifanakalozana tokana tokana, zenim-paritra, nahazoan-dalana ary fantatra ho an'ny forex trading. Ny fe-potoana dia mety hanondro ny varotra vola amin'ny fifanakalozana toy ny IMM ao amin'ny Chicago Mercantile Exchange.
Ny fifanakalozam-bola izay mitaky ny fividianana sy fivarotana amin'ny vola roa amin'ny fotoana iray voafaritra amin'ny fepetra takiana amin'ny vaninandro nanaovana ny fifanarahana, fantatra ihany koa amin'ny hoe 'lega fohy', amin'ny daty mbola ho avy amin'ny ho avy amin'ny taha mifanaiky amin'ny ny fotoana nanaovana ny fifanarahana - 'ny lava lava'.
"Forex" dia anarana fohy ekena ho an'ny fifanakalozana vola vahiny ary matetika dia manondro ny fifanakalozana varotra amin'ny vola vahiny.
Tetika ara-barotra ampiasain'ireo mpivarotra an-tsena miezaka ny manararaotra ny fahasamihafana amin'ny vidin'ny pairs vola. Ilaina ny tombontsoa avy amin'ny fielezan'ny hafa izay atolotry ny broker ho an'ny mpivady iray manokana. Ny paikady dia midika ho fihetsiketsehana haingana amin'ny fahafahana.
Voamarina toy ny ora izay ahafahan'ny mpandray anjara amin'ny tsenan'ny mpividy: mividy, mivarotra, manova ary mandanjalanja amin'ny vola. Ny tsenam-barotra dia mivoha ora 24 isan'andro, dimy andro isan-kerinandro. Ny tsenam-bola dia miara-miasa: banky, orinasa ara-barotra, banky foibe, orinasam-pitantanana famatsiam-bola, vola hedge, fampindramam-bola amin'ny varotra an-tsena ary mpampiasa vola. Ny tsenam-bola iraisam-pirenena dia tsy manana fifanakalozam-barotra afovoany, fa ny tambajotra iraisam-pirenena ny fifanakalozana sy ny varotra. Ny ora fifanakalozana ara-barotra dia mifototra amin'ny raharaham-barotra rehefa manokatra ny firenena mandray anjara. Raha miitatra ny tsena lehibe; Aziatika, Eoropeana ary any Etazonia, dia mihatra ny vola avo indrindra amin'ny varotra.
Izany dia manondro ny marika famantarana, izay matetika ampiasaina amin'ny mpivarotra andro mba hamaritana haingana raha toa ny tsimok'aretina ara-tsosialy dia mety miova avy amin'ny toekarena kajiana ary ny mifamadika amin'izany. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia ampiasaina izy io hamantarana ny fanohanana sy ny fanoherana. Ny pivotan-drakitra fampiasana vola dia novaina ho ny salanisan'ny: ambony, ambany ary akaiky (HLC), hatramin'ny fivarotana varotra teo aloha.
Manaova fanatanjahantena mifandraika amin'ny paikady momba ny fihenan'ny vola amin'ny paositry ny vola, ny fandaniana ary ny vidin'ny fangatahana.
Ny fandefasana toeram-pivarotana izay manolotra volavolan-databatra vola dia manonona ny vidin'ny roa, ny fisaorana ary ny vidin'ny fangatahana - ny fielezana. Ny mpivarotra no miala raha toa ka latsaka ambany noho ny vidin'ny vidin-tsolika, na avo lenta kokoa noho ny vidin'ny fangatahana ny vidin'ny vola.
Programa momba ny varotra varotra Computer mifototra amin'ny famantarana ara-teknika ara-teknika, izay manampy hamaritra raha hiditra amin'ny varotra ho an'ny mpivarotra vola manokana amin'ny fotoana rehetra. Ny robot Forex, ho an'ny mpivarotra antsinjarany, dia matetika manampy amin'ny fanesorana ny singa ara-psikolojika amin'ny varotra.
Izany dia faritana ho toy ny varotra mifototra amin'ny fanadihadiana mba hamaritana raha mividy, na mivarotra piraofilam-bola amin'ny fotoana voafaritra, matetika mifototra amin'ny marika famantarana nateraky ny fitaovana fanodinana teknika, na ny hetsika vaovao fototra sy ny angon-drakitra. Ny rafitry ny varotra varotra dia amboamboarina amin'ny alalan'ny siansa ara-teknika mamorona ny fivarotana na ny fivarotana fanapahan-kevitra, izay mitarika ara-tantara ho an'ny varotra mahasoa.
Indraindray dia ampiasaina ho fanehoan-kevitra hafahafa ho an'ny 'fanolorana' na 'ho avy'. Amin'ny ankapobeny dia misy ny fandaharana miaraka amin'ny vokatra iray mitovy amin'ny fifanarahana amin'ny banky sy mpanjifa.
Ny taham-pampandrosoana dia asongadina amin'ny toeran'ny toerany, mampiseho ny fahasamihafana eo amin'ny taham-pandrosoana sy ny toerana. Mba hahazoana ny taham-pahefana, raha tsy mifanohitra amin'ny tahan'ny fifanakalozana, ny teboka farany dia ampiana na ampidirina amin'ny tahan'ny fifanakalozana. Ny fanapahan-kevitra hanongana na hanampiana ireo hevitra dia voafaritra amin'ny fahasamihafana eo amin'ny tahan'ny tahan'ny vola amin'ny vola mifandraika amin'ny fifanakalozana. Ny vola fototra miaraka amin'ny tahan'ny zanabola ambony dia ambany noho ny vola midina amin'ny vola midadasika amin'ny vidin'ny tsena. Ireo teboka faratampony dia tapaka avy amin'ny tahan'ny toerana. Ny vola latsaky ny tahan'ny zanabola dia avo lenta, ny toeran'ny toerany dia ampiana amin'ny tahan'ny toerana, mba hahazoana ny taham-pahefana.
Ireo no singa ara-toekarena mahakasika ny lafiny ara-toekarena eo amin'ny sehatra isam-paritra na firenena, izay ekena ho fananganana fototra ho an'ny sandan'ny vola iray, izany dia ahitana ny antony toy ny: fiakaran'ny vidim-piainana, ny fitomboana, ny fifandanjan'ny varotra, ny tsy fahampian'ny governemanta, ary ny tahan'ny zanabola. Ireo vokatra ireo dia misy fiantraikany amin'ny vahoaka be fa tsy olona vitsivitsy voafidy.
Fomba iray ampiasaina handrefesana ny lanja fototra amin'ny vola iray mifototra amin'ny vaovao lehibe momba ny fampiasam-bola ara-toekarena, ny politikan'ny governemanta, ary ny hetsika rehetra misy fiantraikany amin'ny firenena vola.
Ity dia fanafohezana ny fifanakalozana vahiny, izay ampiasaina betsaka amin'izao fotoana izao.
Ny FXCC dia marika iraisam-pirenena izay nahazo alàlana sy nifehy tamin'ny fitondrana isan-karazany, ahitana antoko roa: FX Central Clearing Ltd sy Central Clearing Ltd.
Ny FXCC dia manome programa fametrahana demaom-panaovana demaokrasia, izay endri-tsoratra feno an'ny fivarotana varotra FXCC ho an'ny varotra tena izy. Ny sehatra fifanakalozana demo dia mamela ny FXCC mpanjifa hahafantatra tsara ny sehatra fiasa sy ny karazan'asa mahazatra, raha tsy mitaky vola amin'ny fanatanterahana varotra. Ny sehatra dia tsy miditra amin'ny fifanarahana na ny fifanarahana, noho izany, ny tombombarotra, na ny fahaverezan'ny vokatra azo avy amin'ny sehatra dia virtoaly. Tsy misy afa-tsy amin'ny fampisehoana fotsiny.
FXCC Risk Disclosure Document
Ny FXCC Risk Disclosure dia mamaritra ny loza mety hitranga rehefa mivarotra ny CFD sy hanampy ny mpanjifany handray fanapahan-kevitra momba ny fampiasam-bola amin'ny fototra tsy fantatra.
Voafaritra ho ny firenena indostrian'ny firenena indostria: Etazonia, Alemana, Japon, Frantsa, Angletera, Kanada ary Italia.
Ity no G7 plus: Belzika, Holandy ary Soeda, vondrona mifandraika amin'ny adihevitra momba ny IMF. Ny Switzerland no indraindray.
Short for the British Pound.
Voafaritra ho ny hividianana mpivady vola. Ohatra; raha nisy mpanjifa nividy EUR / USD, dia ho 'lava' ny Euro izy ireo.
Izany no hetsika hivarotana mpivarotra vola. Ohatra; raha namidy ny EUR / USD ny mpanjifa, dia ho 'fohy' ny Euro.
Ity dia faritana ho rafitra ara-bola, izay misy governemanta na banky foibe, manatsara ny volany izay afaka mivadika ho lasa volamena be dia be noho ny toetra fototra ananany. Manana fampiasana tsy ampiasana vola izy io, noho izany dia andrasana ny hitazona ny ambaratonga fara-tampon'ny tena fangatahana. Antsoina ihany koa ny rafitra ara-bola an-tsokosoko malalaka, izay ahazoana volamena na banky ho an'ny volamena, no tena fitaovam-pifanakalozana.
Good 'til Canceled (baikon'ny GTC)
Fivarotana mividy na mivarotra amin'ny vidiny milamina izay mbola mavitrika mandra-pahatonga azy ho faty na novonoin'ny mpivarotra.
Teny iray ampiasaina amin'ny teny jargon izay maneho ny tahiry amerikana dolara.
Ny vokatra entana madinika (GDP)
Voafaritra ho ny lanjany manontolo amin'ny entana rehetra sy ny tolotra vokarina any amin'ny firenena mandritra ny fe-potoana voafaritra tsara.
Brong National Product (BNP)
Toe-karena ara-toekarena mitovy amin'ny GDP plus fidiram-bola avy amin'ny vola, fidiram-bola, na fampindramam-bola avy any ivelany.
Ny fanaovan-jiro iray izay misy karazana tsangambato toy ny vatana misy lavalava lava mankany ambany.
Ny fefy dia voafaritra ho ny ampahany amin'ny ampahany amin'ny vidin'ny vidiny, manafoana ny isa enim-bolana. Ao amin'ny tsena fifanakalozana vahiny, ny tohatra dia manondro ihany koa ny ampahany amin'ny vidin'ny sokajy izay miseho amin'ny vidin'ny bidy ary manolotra ny vidin'ny vola. Ohatra; raha toa ny mpivarotra vola EUR / USD dia manolotra ny 1.0737 ary manontany ny 1.0740, dia ny 1.07; Ny tarehimarika dia mitovy amin'ny vidiny sy ny vidin'ny fangatahana. Ny antsoina matetika amin'ny hoe "ilay endrika lehibe" matetika dia ampiasaina ho fehezanteny iray amin'ny famaritana avo lenta avo lenta, ohatra, ny DJIA manakaiky ny 20,000.
Ny vola mafy dia fantatra koa ho ny vola matanjaka ary ny endrika tena sarobidy indrindra amin'ny varotra iraisam-pirenena. Fandaniam-bola amin'ny ankapobeny izy ireo amin'ny ankapobeny ho toy ny karazana fandoavam-bola ho an'ny entana sy ny serivisy. Ny vola matavy dia mitazona ny fahamendrehana amin'ny fotoana fohy ary tena mahamety izany ao amin'ny tsenam-bola. Ny vola sarobidy dia amidy avy amin'ireo firenena manana tontolo ara-toe-karena matanjaka sy ara-politika.
Ny fihetseham-pon'ny banky foibe rehefa maniry ny hampitombo ny tahan'ny zanabola, izay mety hiverina amin'ny vokatra tsara amin'ny vola.
Ohatra iray amin'ny tabilao ampiasaina amin'ny fanadihadiana ara-teknika izay manolo-kevitra ny famerenana ny fironana iray, ohatra, avy amin'ny fanodinana toetran'ny toetr'andro.
Izany dia mitaky ny fametrahana toerana lava sy fohy amin'ny fananana mitovy.
Izany dia karazana fivarotana algorithmika miaraka amina volavolan-dalàna marobe, vita amin'ny haingana haingana.
Ny vidin'ny varotra ambony indrindra na ny vidin'ny varotra ambany indrindra ho an'ny fitaovana fototra ho an'io andro ara-barotra io.
Hitady ny Bid
Ity no fepetra ampiasaina hanoritsiana ny asan'ny mpivarotra mpivarotra vola, rehefa mivarotra eo amin'ny sehatry ny tsena.
Izany dia ny famerenana ny vola ho an'ny dollar Hong Kong (HKD), ny volan'i Hong Kong. Izy io dia natsangana tamin'ny vidin'ny 100, izay matetika no aseho amin'ny marika $, na HK $. Ny fanamarihana sinoa telo mamoaka banky dia manana fahefana hamoaka dolara Hong Kong, eo ambany fitondran'ny governemantan'i Hong Kong. HK $ dia nifindra tany amin'ny tahiry fifanakalozam-bolam-panjakana mitazona dolara Amerikana.
Raha mikasika ny fifanakalozana ara-barotra, io dia faritana ho mpividy vola mpivady.
Fampahalalana ny trano fonenana
Ny tsenan'ny fampitam-bola ara-toekarena mifandraika amin'ny trano, indrindra any Etazonia sy UK, miorina amin'ny antontan-kevitra momba ny trano fonenana.
Izany no isan'ireo tetikasa fanamboaran-trano vaovao (tranom-panjakana manana trano manokana) izay efa nanomboka nandritra ny fe-potoana voatondro, matetika maka isam-bolana na isan-taona.
Iimoku dia novolavolaina talohan'ny Ady Lehibe Faharoa, ho toy ny tsenam-bola ara-bola toetr'andro, tandindomin-doza manaraka ny fanekena ny tapany afovoany amin'ny avo ambony sy ny teboka amin'ny fotoana maromaro. Ny tanjon'ity mari-pamantarana ity dia ny famoronana famantarana ara-barotra mitovy amin'ny fananganana averina, na ny fampifandraisana ny MACD. Ny rindran-tsarin'ny Ikimoku dia mandroso amin'ny fotoana, mametraka ny fanohanana lehibe kokoa sy ny toerana fanoherana, mety hampihena ny loza mety hitranga izany.
Ny Tahirim-bola Iraisam-pirenena natsangana tao amin'ny 1946 mba hanomezana ny fampindramam-bola iraisam-pirenena fohy sy midina.
Ny tahan'ny vokatra vokatry ny fahasamihafana eo amin'ny tahan'ny toerana sy ny tahan'ny ho avy amin'ny fifanakalozana.
Ny vola izay vokatry ny fitsipika fifanakalozana ara-barotra na ny sakana ara-batana dia tsy azo takarina amin'ny vola hafa. Ny vola tsy azo itokisana dia mety ho voafetra amin'ny varotra, noho ny volavolan-dalàna manokana, na amin'ny sazy ara-politika.
Endritsoratra indraindray dia rehefa ny USD no fototra ijoron'ny mpivady fa tsy ny vola vola. Koa satria ny USD no vola lehibe indrindra amin'ny tsenam-barotra maneran-tany, dia matetika izy io no ampiasain'ny fotony sy ny vola hafa, ohatra ny Yen Japoney na dolara kanadiana ampiasaina ho toy ny vola vahiny.
Indeksan'ny famokarana indostrialy (IPI)
Sari-bola ara-toekarena izay miara-miasa amin'ny tsena. Izy io dia avoakan'ny Birao Federaly Federaly ao Etazonia amin'ny alàlan'ny isam-bolana ary mamaritra ny vokatra fanodinana ny harena ankibon'ny tany, ny famokarana ary ny famatsiana.
Voafaritra ho ny fiakaran'ny vidin'ny entona mpanjifa, mifandraika mivantana amin'ny fihenan'ny famindram-pahefana.
Fepetra takiana voalohany
Ity dia faritana amin'ny hoe ny salan'isan'ny marika ambany indrindra ilaina, mba hametrahana toerana vaovao misokatra, izay tsy maintsy ambany kely na mitovy ny sisin'ny mari-pamantarana ny marika voalohany. Ny fepetra takiana voalohany dia azo aseho amin'ny isan-jato (ohatra: 1% amin'ny sandan'ny vola US dollar), na azo alaina avy amin'ny tahan'ny vola.
Ny tsena iraisam-barotra dia voafaritra ho ny tsenan'ny mpivarotra, amin'ny fivarotana FX izay mety hamorona tsena amin'ny fifanakalozana vahiny.
Tahan'ny fifanakalozam-bola vahiny eo amin'ny banky iraisam-pirenena.
Izany orinasa brokerage miasa ao amin'ny tsenambarotra (na OTC derivatives), miasa ho mpanelanelana eo amin'ny mpivarotra lehibe sy ny varotra mpivarotra. Ohatra; mpikambana ao amin'ny London Stock Exchange, izay avela hikarakara ireo mpandraharaha ara-barotra, raha tsy mifanohitra amin'ny olon-tsotra.
Ny vola aloa amin'ny fampiasana vola. Ny tahan'ny zanabola dia voatery miantraika amin'ny tahan'ny fehezin'ny Fed.
Noho ny zava-mitranga, ny fahasamihafan'ny tahan'ny zanabola ary ny fahasamihafana eo amin'ny tahan'ny fifampitifirana sy ny toerana eo anelanelan'ny faritra roa dia mitovy. Ny fifangaroan'ny tahan'ny zanabola dia mampifandray azy: ny tahan'ny zanabola, ny fifanakalozam-ponenana ary ny tahan'ny fifanakalozana vahiny
Hetsika iray avy amin'ny foibe iray izay misy fiantraikany amin'ny sandan'ny volany, amin'ny alalan'ny fivarotana na fividianana vahiny ho takalon'ny tokantranony manokana, ho fanandramana hamelezana ny tahan'ny fifanakalozana.
Ampifandraisina amin'ny toerana asaina ataon'ny mpanjifa FXCC ao anatin'ny andro. Amin'ny ankapobeny, mihodinkodina amin'ny farany.
Naverina ho olona, ​​na fikambanana ara-dalàna izay mampiditra mpanjifa ho an'ny FXCC, matetika ho setrin'ny famoizana amin'ny vidin'ny entana. Ny mpilatsaka an-tsitrapo dia voasakana tsy hanaiky ny vola natokana amin'ny mpanjifany.
Voafaritra ho toy ny fifanarahana izay mahatonga ny vondron'olona iray mifamatotra ny fifandraisana mifandraika amin'ny fifandraisany amin'ny fifanakalozam-bola amin'ny fifanakalozana vola sy ny fitakiana ny toe-bolan'ny fifanakalozana. Ireo banky afovoany mandray anjara amin'ity fifanarahana ity dia mitazona ny fiaramanidina miaraka amin'ny fividianana sy fivarotana ny volany.
Izany no fikajiana vola ho an'ny Yen Japoney (JPY), ny vola ho an'i Japana. Ny yen dia ahitana 100 sen, na 1000 rin. Ny Yen dia matetika misolo tena (toy ny marika) amin'ny litera Y, miaraka amin'ny teboka roa amin'ny alalan'ny afovoany.
Voafaritra ho ny vola ampiasaina ho toy ny refereneran'ny fifanakalozana iraisam-pirenena sy amin'ny fametrahana tahan'ny fifanakalozana. Ny banky afovoan-tanàna dia mitazona vola be amin'ny tahiry ary ny dolara amerikana dia raisina ho ny vola manan-danja indrindra manerantany indrindra manerantany.
Ny Keltner Channel dia novolavolaina ary noforonin'i Chester W. Keltner tao amin'ny 1960 ary nasongadiny tao amin'ny bokiny hoe "Ahoana no Hanangonam-bola?". Ny Keltner Channels dia mitazona andalana telo, ahitana ny: mozika tsotra, mihetsiketsika, miaraka amin'ny tandrony ambony sy ambany izay nipoitra teo amboniny ary teo ambanin'ny lembalemba. Ny sakan'ny bandy (mamorona ny fantsona), dia mifototra amin'ny mpampiasa mampifanaraka ny rindrankajy ampiasaina amin'ny "True True Range". Ity vokatra ity dia nampidirina ary nakarina tamin'ny làlan-tendran-tseranana afovoany.
Slang ho an'ny dolara New Zealand.
Fantaro ny mpanjifa, fomba fanao mahazatra arahin'ny fikambanana brokerage toy ny FXCC.
Mpitarika mitarika sy mijanona
Saika ny rehetra (raha tsy izy rehetra) dia ny fitakiny ara-teknika, tsy mitarika; Tsy manome porofo izy ireo fa, ohatra, ny mpivady iray dia mitazona amin'ny fomba sasany. Ny fanadihadiana fototra iray dia mety hitarika, raha toa ka mety ho filazana manjo azy ny fisehoan-javatra. Ny fanadihadiana momba ny mpanjifa mividy fahazarana amin'ny hoavy dia mety hanondro ny fahasalaman'ny sehatry ny varotra. Ny fanadihadiana iray momba ny trano fananganana trano dia afaka manaporofo ny fanoloran-tenan'izy ireo hanorina trano maro kokoa. Ny fanadihadiana CBOT dia manondro ireo mpivarotra fanoloran-tena natao mba hividy sy hivarotra singa ara-bola sasany.
Ankavia eo ankavia
Famarotana ny vola voatanisa, fantatra amin'ny hoe ny vidin'ny vidin'ny teny.
Ny lanjan'ny volan'ny firenena, izay nekena ho lalàna amin'ny fomba ofisialy ny fandoavam-bola. Ny vola nasionaly dia heverina ho nahazo alalana avy amin'ny fanjakana any amin'ny ankamaroan'ny firenena, ary ampiasaina handoavana ny tompon'andraikitra manokana na ho an'ny vahoaka, ary hihaona amin'ny fanoloran-tena ara-bola. Ny tompon-trosa dia tsy maintsy manaiky ny fangatahana ara-dalàna amin'ny famerenana ny trosa. Ny fanomezan-dàlana ara-dalàna dia nomen'ny tompon'andraikitra nasionaly, toy ny Treasury US any Etazonia sy Bankin'ny Angletera any Angletera.
Izany no fanaraha-maso ny toerana lehibe, amin'ny alalan'ny fampiasana vola kely.
Ny adidy dia adidy hanome vola vola amin'ny daty voafaritra amin'ny hoavy amin'ny mpifanandrina.
Ny tolotra Inter-Bank ao Londona.
Misy fepetra fetra azo ampiasaina hametrahana varotra hiditra amin'ny tsena amin'ny vidiny efa voafaritra mialoha. Raha vantany vao tonga ny vidin'ny vidin-tsolika, dia mety ho voatanisa ny baiko (fehintseranana tsy manome antoka fa hamarana ny baiko) amin'ny vidiny voatondro. Mety hitranga izany, noho ny tsy fahavitrihanao eny an-tsena izay ahitan'ny tsena ny vidin'ny vidiny ary avy hatrany dia miverina avy any amin'ny fetra farafahakeliny, miaraka amin'ny volavolan-dalàna kely varotra. Avy eo, ny fepetra voafetra dia mety tsy hitranga ary hitoetra ho manan-kery mandra-pahatongan'ny fotoana hamonoana azy na mandra-pandefan'ny mpividy an-tsitrapo ny baiko.
Ity no vidin'ny baiko apetraky ny mpanjifa amin'ny fametrahana baiko fetra.
Ny tabilao tsotra dia mampifandray ny vidin'ny tokana ho an'ny fotoana voafaritra.
Ity ny fepetra eo amin'ny tsena izay misy ny habetsaky ny volam-barotra mihidy, mba hividianana mora, na mivarotra fitaovana amin'ny ankapobeny amin'ny (na akaiky) ny vidin'ny voatanisa.
Voafaritra ho toy ny raharaham-barotra izay manidy, na manidy toerana efa nisy teo aloha.
Raha vao tsy manana vola ampy hitazonana ny toerana misokatra ny kaonty mpanjifa, dia hitranga ny fametrahana amin'ny alàlan'ny kaonty manokana izay hanafoana ny toerana malalaka amin'ny vidiny tsara indrindra amin'ny fotoana voafetra. Ny mpanjifa dia afaka misoroka ny fametahana ny kaontiny sy ny toerana misy azy amin'ny fametrahana ny marika fanampiny ao amin'ny kaonty, na amin'ny fanakanana ny toerana misokatra efa misy.
Ity no teny ampiasaina hamaritana ny habetsan'ny volavolana azo vidiana, na mivarotra amin'ny fotoana voafaritra.
Noho ny antso an-tariby nataon'ny Gold Gold Pool (Scotia-Mocatta, Banky Deutsche Bank, Barclays Capital, Societe Generale ary HSBC), ny vidin'ny metaly sarobidy toy ny volamena, volafotsy, platinum ary palladium dia napetraka isan'andro fototra ao amin'ny 10: 30 (London am fix) sy 15: 00 GMT (fiambenana Londres pm). Ny vidin-tseranana ao Londres dia heverina ho voa mafy rehefa tapitra ny antso amin'ny fihaonambe.
Rehefa nanokatra sehatra vaovao hividianana mpivarotra vola ny mpanjifany dia heverina fa lasa 'lava' izy.
Ny mpivarotra sy ny jiolahy ho an'ny mpivarotra vola USD / CAD.
Voafaritra ho toy ny venty ampiasaina handrefesana ny lanjan'ny fifanakalozana. Ny fifampiraharahana dia resahina amin'ny isa ny varotra, fa tsy amin'ny vidin'ny vola. Izany dia fehezan-teny mahazatra mifandraika amin'ny baikon'ny 100,000.
Endrika iray mampiseho ny fifandraisana eo amin'ny roa isan-tsegondra mihetsiketsika sy ny fomba fifandraisan'izy ireo rehefa miova ny vidiny. Izany dia mampiavaka ny mari-pamantarana maivana.
Ity no marika ambany indrindra, izay tokony ho an'ny mpanjifa ao amin'ny FXCC, mba hanokafana hatrany na hanohanana toerana misokatra.
Major Ny tsiroaroa
Ny mpivady lehibe dia manondro ny mpivady vola izay tena varotra amin'ny tsenam-bola, toy ny EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, USD / CHF. Ireo antontan'isa goavana lehibe ireo dia mitondra ny tsena iraisam-pirenena, ny sandan'ny USD / CAD sy ny AUD / USD dia mety ho heverina ho toy ny majestic, na dia antsoina hoe "mpivady" aza izany.
Izany no vokatra nivoaka tamin'ny sehatry ny orinasa mpamokatra ny endriky ny indostria.
Izany dia fampiasana rehefa misy mpitantan-bola handoa vola amin'ny kaontin'ny mpanjifa amin'ny fomba iray mitovy amin'ny fampiasana mpanolotsaina fampiasam-bola, mba hitantanana ny kaonty fampiasam-bola, ohatra ny vola.
Mihazakazaka ny fiantsoana rehefa mipoitra amin'ny 100% ny fatran'ny mpanjifa eo ambany fifehezan'ny FXCC. Ny mpanjifa dia manana safidy hanampiana vola bebe kokoa mba hahafeno ny fepetra maripàna ary hisoroka ny "Stop Out" na ny manakatona ny varotra tsy dia mahafa-po.
Izany dia faritana amin'ny habetsahan'ny mpanjifan'ny banky voatokana amin'ny toerana misokatra misokatra.
Ny marika sy ny fampiasana dia mifamatotra. Raha ny marina, ny ambany dia ny fampiasam-bola, ny avo kokoa ny marika
Ilaina ny mihazona toerana iray misokatra sy ny mifamadika amin'izany. Matematika; margin = fifanakalozana open / varotra varotra varotra. Ohatra; Saram-bola USD / CHF 100,000 USD amin'ny tahan'ny fivarotana varotra ambany indrindra amin'ny 100: 1, dia mitaky maridrefana mitovy amin'ny 100,000 / 100 na $ 1,000. Raha hanombatombana ny sisintany ho an'ny paosam-bola, ny USD dia tsy ny fototra (voalohany) vola (ohatra EUR / USD, GBP / USD) ary ny fiampitana (EUR / JPY, GBP / JPY) amin'ny fampiasana ny tahan'ny fifanakalozam-bola (s). ohatra; raha misy mpanjifa mahazo vola EUR / USD 1, raha ny 1.0600 vidiny. Noho izany, ny 100,000 EUR dia mitovy amin'ny 100,600 USD. $ 100,600 / 100 fampiasana vola = $ 1,006.00
Ny fehezanteny dia ampiasaina amin'ny fotoana voafaritra amin'ny andro anakanan'ny tsena, izay 5 PM EST amin'ny zoma ho an'ny mpikaroka forex spot.
Izany dia mampiseho ny fividianana / amidy amina tsena amin'ny fitaovana manokana.
Amin'ny ankapobeny ampiasain'ny brokerage STP sy ECN, ity dia fomba fanao famonoana raha tsy azo antoka ny mpivarotra mba hahazo ny vidiny voatazona eo amin'ny efitranon'ny terminal, fa azo antoka kosa ny hahazo ny varotra novonoina. Tsy misy famerimberenana intsony amin'ity karazana famonoana ity.
Ny mpanao tsena dia nofaritana ho olona, ​​na orinasa manam-pahefana hamorona sy hitazona tsena amin'ny fitaovana iray.
Ny lozam-barotra dia raisina ho toy ny filaminana hividy, na hivarotra mpivady iray, amin'ny vidin'ny tsena ankehitriny. Ny baikon'ny tsena dia novonoina tamin'ny vidiny naseho tamin'ny fotoana nidin'ny mpampiasa ny bokotra 'BUY / SELL'.
Izy io ny fehezan-teny amin'izao fotoana izao, izay vola azo ifanakalozana ho an'ny iray hafa amin'ny fotoana tena izy.
Izany dia manondro ny mety hitranga mety hipoitra avy amin'ny tsena, ohatra, ny fanomezana sy ny fangatahana, izay vokatr'izany dia miteraka ny lanjan'ny fampiasam-bola hikoriana.
Ity no teny ampiasaina hanehoana ny fifandraisan'ny fitoviana ara-drariny, ny fitakiana maimaim-poana.
Voafaritra ho ny daty hanaovana fitsaboana amin'ny fifampiraharahana izay efa voafaritra mialoha amin'ny fotoana hidirana amin'ny fifanarahana.
Vola avoakan'ny varotra
Ny fitaovana ampiasaina dia aseho ho tahan'ny, afaka manokatra toerana vaovao. Izany dia ahafahan'ny mpivarotra miditra an-tsena miaraka amin'ny varotra avo lenta kokoa noho ny fametrahana voalohany ny fametrahana azy ireo. Ohatra; ny fampiasana 100: 1 dia manome ny mpanjifa ny fahafahana mifehy ny toeran'ny $ 100,000 lot, miaraka amin'ny marika $ 1,000 ($ 100,000 / 100 = $ 1,000).
Izy io no lehibe indrindra amin'ny antonony fifanarahana ao amin'ny Forex ara-barotra izay mitovy amin'ny 1,000 singa amin'ny vola fototra.
Loko madinidinika no manome fahafaha-manao mpivarotra vaovao hampiofana tsikelikely kely kokoa ary hampihena ny loza mety hitrangan'izany.
Ao amin'ny kaonty micro, dia afaka manao varotra bitika ny mpanjifa, noho izany dia matetika io karazana kaonty io no malaza any amin'ny mpivarotra vahiny izay ahafahany mandany vola kely.
Ity karazana kaonty ity dia ahafahan'ny mpivarotra miditra an-tsena amin'ny toerana misy 1 / 10 ny haben'ny lanjany.
Ny loto dia manana volavolan-barotra amin'ny 0.10, izay ny sandan'ny pipes iray raha toa ka mitovy amin'ny $ 1.
Minora vola pairs
Ny mpivarotra vola madinika, na ny "zaza tsy ampy taona" dia vondrona andaniny sy vola hafa. Ohatra, hampifanaraka ny Euro amin'ny Euro (GBP / GBP) ny Euro raha oharina amin'ny mpivarotra vola madinika, na dia be mpividy aza izy ireo ary ny fihenan'ny tsimok'aretina dia ambany. Ny dolara New Zealand mifanohitra amin'ny US dollar (NZD / USD) dia azo sokajiana ho toy ny mpivarotra vola madinika, na dia voamarina ho toy ny "mpivarotra tsena" aza.
Izany dia tetikady ara-barotra ahafahan'ny mpampiasa 'hivarotra varotra' hafa ho an'ny mpivarotra sy ny mpampiasa vola. Izy ireo dia handika ny fampiasam-bola amin'ny mpampiasa hafa izay hisaintsaina amin'ny kaontiny momba ny varotra.
Volana-on-volana. Ny fatoram-bolana ampiasaina amin'ny fikajiana ny fiovan'ny isan-jato amin'ny indices mandritra ny fe-potoana isam-bolana.
Ity teny ity dia ampiasaina raha ny mpihazakazatra no mandinika ny fotoana fohy amin'ny hetsika fihenam-bidy, fa tsy ny fototra. Ny paikady dia mifototra amin'ny haavo.
Ny tsenam-barotra vola dia fomba iray hiarovana amin'ny familiana vola ary manome alalana ny orinasa hampihenana ny tahan'ny vola rehefa manao raharaham-barotra miaraka amin'ny orinasa vahiny. Alohan'ny handaminana ny fifanakalozana, dia hampidirina ny sandan'ny orinasa vahiny, mba hahafahana miantoka ny fandaniam-bola amin'ny ho avy ary ny fiantohana ny orinasa ao an-toerana dia hanana ny vidiny afaka sy vonona ny handoa.
Miala ny lanjany (MA)
Voafaritra ho toy ny fomba famenoana ny angon-drakitra / tahirin-kevitra amin'ny vidiny ny salanisan'ny salan-tserasera.
Izany dia mitranga rehefa misy liquidity ambany eny an-tsena nefa sarintsarim-pandrosoana goavana amin'ny vidiny sy ny fielezany. Amin'ny tsenan'ny tery tery dia matetika misy saram-bidy / fangatahana mangataka.
Voafaritra ho fiheverana mahakivy (SWAP) mandalo toerana iray mandritra ny alina.
Amin'ny endrika famolavolana drafitra, ny fototry ny loha sy ny soroka na ny mifanohitra aminy.
Io no fahasamihafana amin'ny tahan'ny zanabola avy amin'ny firenena roa ambangovangony. Ohatra, raha lava amin'ny EUR / USD ny mpivarotra iray, dia izy no tompon'ny Euro ary mitaky ny vola amerikana. Raha ny teboka manaraka ho an'ny Euro dia 3.25% ary ny toerana / manaraka ny tahan'ny Etazonia dia 1.75%, dia ny 1.50% (3.25% - 1.75% = 1.50%).
Voafaritra ho toy ny fomba fitsaboana, izay tsy misy afa-tsy ny fahasamihafana amin'ny vola ampiasaina amin'ny farany.
Ny toeran'ny tranonkala dia ny vola nividianana na amidy izay tsy mifanalavitra amin'ny toeran'ny mitovy habe.
Izy io dia faritana ho ny fananana tsy lany hafa. Azo lazaina ihany koa fa ny fananana harena.
Hetsika fivarotana eo amin'ny 8: 00 AM EST '5: 00 PM EST. (Fotoana i New York).
Noheverina ho toy ny format fampifandraisana ampiasaina amin'ny sehatra varotra ho an'ny mpampiasa manana votoatin-drakitra matetika.
Tsy misy biraon'ny mpiasam-panjakana (NDD)
FXCC dia "mpiasan'ny fandefasam-barotra" ho an'ny broker. Ny NDD dia voafaritra ho ny fidirana tsy voafehy amin'ny tsenan'ny banky, raha toa ny mpivarotra vahiny. Mpanao fifanakalozam-bola amin'ny fampiasana ity baiko an-dalam-panodinana ity mankany amin'ireo mpamatsy vola liquidity, fa tsy mifampiraharaha amin'ny mpamatsy vola lique iray. Ny baikon'ny mpivarotra iray dia atolotra amin'ny mpamatsy maro, mba hahazoana ny tolotra tsara indrindra ary mangataka ny vidiny.
Teny iray ampiasaina hanondroana hetsika sasantsasany izay tsy azo hazavaina amin'ny anton-javatra fototra na ara-teknika.
Fanan-karama tsy ara-pambolena
Daty statistika nalain'ny Bureau of Statistics Statistics, izay mifanaraka amin'ny tahirim-bola ho an'ny ankamaroan'ny Etazonia. Tsy tafiditra ao anatin'izany izy ireo: mpiasa mpamboly, mpiasa an-trano tsy miankina, na mpiasan'ny fikambanana tsy mitady tombom-barotra. Izy io dia endri-tsoratra fototra navoaka isam-bolana.
Ny sanda ara-bola eo amin'ny fitaovana ara-bola dia ny lanjan'ny toerana amin'ny dolara.
Izany no fampiendrehana ny dolara New Zealand sy ny dolara amerikana dolara amerikana. Mampiseho amin'ny mpivarotra ny habetsahan'ny dolara amerikana mila vola tokana ho an'ny New Zealand dollar. Ny fifanakalozana ny mpivady NZD / USD dia matetika antsoina hoe "varotra ny Kiwi".
OCO mandidy (iray hamarana ny lamina hafa)
Ny karazana baoritra izay misy ny fijanonana sy ny famerana ny lamandy dia atao amin'ny fotoana iray ihany, ary raha toa ka hovitaina ny varotra, dia hofoanana ny iray hafa.
Ity no vidin'ny mpivarotra iray hivarotra vola. Ny tolotra dia antsoina koa hoe vidin'ny fangatahana.
Izany toe-javatra izany dia mety hitranga ao amin'ny tsenam-bola, izay matetika dia mihelina ary maneho ny fisehoan-javatra izay mampiakatra ny isan'ireo mpivarotra mivarotra fitaovana mihoatra ny isan'ny mpivarotra vonona hividy.
Izany dia fivarotana iray izay manala ny manala na mampihena ny sasany, na ny loza ateraky ny tsena amin'ny toerana misokatra.
Vehivavy antitra ao amin'ny Threadneedle Street, teny iray ho an'ny banky foibe any Angletera.
Izy ity dia kaonty ao anatin'ireo mpikarakara roa izay ahitana ny kaonty manokana sy ny fifanakalozana dia tafiditra ao anatin'ny kaonty omnibus, fa tsy voatokana manokana. Ny mpivarotra ho avy dia hanokatra ity kaonty ity miaraka amin'ny orinasa iray hafa, izay ny fanatanterahana ny fanodinana ny fifanarahana sy ny asa atao amin'ny anaran'ny tompona kaonty.
Voafaritra ho rafitra an-tserasera manome alalana ny fifanakalozana vola amin'ny firenena. Ny tsenan'ny fandefena dia decentralized ary tamba-tseky ny ordinatera izay mampifandray banky, fifanakalozam-bola amin'ny aterineto sy mpikaroka forekera izay mamela ny fandefasana ireo vola nomanina.
Fanandramana hampihenana ny tsena, amin'ny vidin'ny tsena ankehitriny.
Ny tontalin'ny fifanarahana tsy misy ifandraisan'ireo mpandray anjara amin'ny tsena amin'ny faran'ny andro varotra rehetra.
Izy io dia faritana ho lamandy izay hovonoina rehefa mihetsika ny tsena ary mahatratra ny vidiny voalaza.
Ny toerana rehetra izay nosokafan'ny mpivarotra iray izay tsy nakaton'ny fifanolanana mitovy na mifanohitra aminy mitovy.
Fenitra fanokafana misokatra
Ny varavarankely FXCC izay maneho ny toerana misy ny mpiasam-panjakana rehetra misokatra.
Ny didy dia faritana ho torolàlana avy amin'ny mpanjifa mba hividy na hivarotra mpivarotra vola iray, amin'ny alàlan'ny sehatra fifanakalozana FXCC. Azonao atao ny mandray anjara eto amin'ny Wikipedia amin'ny alàlan'ny fanitarana azy. Jereo koa ny pejy Ahoana ny manao takelaka rehefa te-hijery hoe ahoana no fanaovana azy.
OTC Fandrosoana Foreign Exchange
Mandritra ny fifanakalozan-kevitra (ny fifanakalozana) ny tsena fifanakalozana vahiny, izay mpandray anjara amin'ny tsena, toy ny FXCC sy ny mpanjifa, dia miditra amin'ny fifanarahana mifampiraharaha mivantana, na ny fifampiraharaham-barotra hafa mifandraika amin'izany, izay amboamboarina ny marika ary napetraka amin'ny toerana ambony.
Ny fisehoan-javatra raha misy ny firoboroboana ara-toekarena iray maharitra mandritra ny fotoana lava, ka miteraka fitomboan'ny fitadiavam-bola izay tsy azo atonina amin'ny fahaiza-mamokatra dia afaka miatrika ny toekarena tafahoatra, izay matetika vokatry ny fitomboan'ny tahan'ny zanabola sy ny fiakaran'ny vidim-piainana.
Voafaritra ho toy ny raharaha hatramin'ny androany mandra-pahatongan'ny andro fiasana manaraka.
Mitombo ny fahasamihafana rehefa maka ny vidin'ny tombony hafa ny vidin'ny tombony, ohatra; raha iray dolara ny iray dolara amerikana. Ny "vidin'ny parité" dia ampiasaina ihany koa ho an'ny vola aman-karena, raha toa ka manan-danja mitovy ny fananana roa. Ny mpivarotra sy ny mpampiasa vola amin'ny fifanakalozan-kevitra dia mety hampiasa ny hevitry ny vidin'ny parité, mba hahafantarana raha mahasoa ny manova ny fifamatorana amin'ny vola.
Ny pip dia nofaritana ho hetsika fihenam-bidy madinika izay mampiakatra ny tahan'ny fifanakalozana, mifototra amin'ny fivorian'ny tsena. Ny sandan'ny vola lehibe indrindra dia avo lenta amin'ny toerana fonenana efatra, ny fiovana kely indrindra dia ny an'ny farany. Ho an'ny ankamaroan'ny pairs, dia mitovy amin'ny 1 / 100 amin'ny 1%, na fototra iray.
Ny vidin'ny pipo tsirairay amin'ny varotra nomena, izay niova ho ny kaontin'ny mpivarotra.
Pip value = (iray piper / fifanakalozana).
Izany dia heverina ho toy ny baiko tsy mitongilana izay mbola miandry ary miandry ny hamonoana azy, amin'ny vidiny voafaritry ny mpanjifa.
Ny fiatrehana ny fiovan'ny politikan'ny governemanta izay mety hisy vokany mifanohitra amin'ny toeran'ny mpampiasa.
Fahavitrihana ambany na fihenam-bidy madinika indrindra.
Voafaritra ho ny fanoloran-tena tanteraka amin'ny vola nomena. Ny toerana dia mety ho marefo, na kianja (tsy misy tarehimarika), lava, (vola fanampiny nividianana noho ny varotra), na fohy (vola vidy noho ny nividianana).
Zava-mahaliana (SWAP) amin'ny tombontsoam-bahoaka ny fisokafana toerana iray misokatra amin'ny alina.
Fitsipika hafa ho an'ny mpivady GBP / USD.
Ny vidiny ahafahana mivarotra na hividy ny vola na vola tranainy.
Ny fantsom-bola dia miforona amin'ny fametrahana andalana roa mifanaraka amin'ny tabilao ho an'ny fitaovana enti-miasa. Raha miankina amin'ny fihetsika eny an-tsena dia mety hiakatra na hidina ny horonan-tsarimihetsika. Ampiasaina hampifandray ireo ambony sy ny tadin-tseranana ny tsipika, ary ny tandrony ambony dia maneho ny fiarovana ary ny ambaratonga ambany dia maneho ny fiantohana fanohanana.
Ity ny volavolan-dalànan'ny tsena (fotoana tena izy, na ny faharetana).
Milaza ny tsena fa ny mpandray anjara tsirairay dia manana zo mitovy.
Noheverina ho toy ny fihetsika mihazakazaka foana eo amin'ny lalana iray.
Ny taham-pahaizana ampiasaina amin'ny famerenana ny tahan'ny fampindramam-bola amin'ny banky any Etazonia.
Ny Pricing Indexer (PPI)
Ny PPI dia manatsara ny fiovaovan'ny vidin-tsolika amin'ny taham-pivarotana harena an-kibon'ny tany, manofa ny mpamokatra vokatra tsara nataon'ireo mpamokatra, ary miasa ho endriky ny fiovan'ny vidin'ny varotra.
Ny famaranana na ny famafana toerana iray mba hahazoana tombony.
Fampahalalana ara-toekarena izay mandrefy ny tanjaka ara-toekarenan'ny sehatry ny famokarana. Amin'ny fanangonana fanadihadiana isam-bolana eo amin'ny manodidina. Mpividy 300 mividy mpitarika, manome vaovao momba ny fepetra ara-barotra ary miasa ho fitaovana fanapaha-kevitra ho an'ny mpitantana.
PSAR, fijanonana ary fanodinana parabolika (SAR)
Indikativa izay ampiasaina hamaritana ny fijanonana farany amin'ny toerana fohy sy lava. SAR dia manaraka ny rafitra manaraka.
Quarter-on-telovolana. Ny fombam-piraketana ampiasaina amin'ny fikajiana ny fiovaovana isan-jato amin'ny indices isan-karazany.
Politika politika ampiasain'ny Banky Foibe mba hampidina ny tahan'ny zanabola ary hampitombo ny vola amin'ny alalan'ny fividianana ny vola azo avy amin'ny tsena. Ity dingana ity dia mikendry ny hampitombo mivantana ny sehatra tsy miankina amin'ny toekarena sy ny famerenana ny fiakaran'ny vidim-piainana.
Mifototra amin'ny fanolorana sy fangatahana mpivarotra vola.
Raha ny Forex ara-barotra dia midika ny paipaipaipaipaika, ny fanisàny dia milaza ny vola faharoa amin'ny mpivady.
Ohatra; Amin'ny EUR / GBP, ny pound ao Angletera dia ny vola ampiasaina ary ny euro no fototra ijerena. Ao amin'ny teny filamatra mivantana, ny vola voatanisa dia foana ny vola vahiny. Amin'ny teny indirect indirect, ny vola ofisialy dia foana ny vola anatiny.
Izany dia vanim-potoana mitohy amin'ny fitomboan'ny vidin'ny vola.
Ny fari-piadidiana dia azo faritana amin'ny maha-fahasamihafana eo amin'ny avo lenta sy ny vidin'ny vola, ny fifanarahana amin'ny ho avy na ny index mandritra ny fe-potoana iray. Fanamarihana ihany koa ny tsy fahampian'ny vidin'ny vola.
Ny varotra varotra dia mamaritra ny vidin'ny vidin-tsolika ao anaty fantsona ary mampiasa ny teknikam-panadihadiana ara-teknika, ny fametrahana fototra sy fanohanana fototra dia afaka mamela ny mpividy entana hanapa-kevitra ny hividy na hivarotra sy fitaovana arakaraka ny vidiny eo akaikin'ny faran'ny fandaharana na akaikikaiky.
Voafaritra ho toy ny vidin'ny vola iray amin'ny teny iray hafa, raha oharina amin'ny USD.
Izany no tombony sy fahaverezana vokatry ny toerana mihidy.
Voafaritra ho toy ny famerenana ny ampahany amin'ny fandoavam-bola tany am-piandohana ho an'ny serivisy sasany (ohatra fanolorana Forex / rabetra).
Ny fitsangatsanganana dia manondro ny fisehoan-javatra raha mihena ny toekarena ao amin'ny firenena iray ary ny fihenan'ny raharaham-barotra.
Fitsangatsanganana ity, matetika amin'ny alalàn'ny masoivohom-panjakana iray mamoaka torolalana sy fepetra maromaro natao hiarovana ny mpampiasa vola.
Raha toa ny vidin'ny firenena tsirairay dia mety miovaova ho an'ny vokatra mitovy amin'ny tahan'ny ampahany mitovy amin'ny fotoana maharitra. Ny antony mahatonga ny fahasamihafan'ny vidin'entana dia mety: ny haba, ny saram-pandefasana ary ny mari-pahaizana momba ny kalitao.
Ny mari-pamantarana matanjaka mifandraika (RSI)
Ny oscillator mahery, izay endriky ny fitarihana. Eritrereto ny tanjaka sy ny fahalemena arakaraky ny famaranana ny vidiny mandritra ny fotoana voafaritra.
Ny Banky Foiben'i Aostralia.
Ny Banky Foiben'i Nouvelle Zélande.
Fivarotana ara-barotra izay mitranga rehefa mampihatra varotra amin'ny vidiny iray ny mpampiasa vola, fa ny mpividy dia mamerina ny fangatahana amin'ny teny hafa. Ny FXCC dia manome ny mpanjifany manana fidirana mivantana amin'ny volavolan-drakitra Forex ECN izay ahafahan'ny mpanjifa mahazo ny fidirana mitovy amin'ny tsenam-bola ihany koa ary ny raharaham-barotra dia tanterahina tsy misy hatak'andro, tsy misy fanemorana na averina.
Azo lazaina matetika hoe "tahiry" izany: vola, entana, na kapital-bola hafa, izay notazonin'ny manampahefana monisipaly. Ohatra; Ireo banky foibe dia mety mampiasa tahiry ho an'ny fananganana ara-bola: ny tsy fananana varotra, ny fanaraha-maso ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny FX ary ny adihevitra amin'ny olana hafa rehetra misy ny banky foibe dia manana fandefasana. Ny tahirin-tsakafo dia matetika milamina sy mivantana eo ambany fahefan'ny fahefam-panjakana.
Noheverina ho vola azo antoka ihany koa. Matetika izy io no misy vola be amin'ny banky foibe mba hampiasaina handoavana ny fanolorana trosa iraisam-pirenena.
Toerana fanoherana, na Level
Io dia ampiasaina amin'ny fanadihadiana ara-teknika ary na ny vidiny na ny ambaratonga izay hanakana ny hetsiky ny fifanakalozam-bola vahiny miditra ambony. Raha toa ka tapaka ny haavony, dia andrasana fa hitohy hivoatra hatrany ny vidin'ny fitaovana.
Varotra Foreign Exchange Dealer - RFED
Raha toa ka tsy misy fifanakalozana ny fividianana na fivarotana fitaovana ara-bola dia tsy maintsy misy ny olona na ny fikambanana mba hiasa toy ny antoko. Hetsika RFED amin'ny fifanakalozam-bola mifandraika amin'ny fifanarahana amin'ny fifidianana, ny safidy amin'ny fifanarahana amin'ny takila sy ny fifanarahana mifandraika amin'ny mpandray anjara izay tsy mpandray anjara amin'ny fifanarahana.
Mpamatsy vola sy mpivarotra antsinjarany
Raha misy mpividy / mpivarotra mividy na mivarotra fiarovana, CFDs, vola, vola, sns. Ho an'ny kaonty manokana, dia heverina ho mpivarotra / mpivarotra varotra izy.
Izany dia fiovan'ny fiovan'ny vidin'ny varotra sy ny varotra antsinjarany. Ankoatra ny CPI, RPI koa dia fandaniana ny fandaniana ny firenena iray.
Amin'ny maha-dingana ara-toekarena ara-toekarena ny fandaniana sy ny fampiasana tanjaka ara-ekonomika
Ireo dia taham-pivarotana vola (avy amina fotoana fohy) ampiasaina ho valiny fototra amin'ny mpivarotra vola mba hamaritana raha tsy tombombarotra na fahaverezan'asa amin'ny andro. Ny tahan'ny fanenan-danja dia heverina ho ny famaranana ny androm-piafaran'ny andro teo aloha.
Mifanaraka amin'ny fangatahana, na manolotra ny vidin'ny fifanakalozana vahiny. Ohatra; amin'ny EUR / GBP raha mahita vidin'ny 0.86334 - 0.86349, ny tànana havanana dia 0.86349. Ny tanana ankavanana dia ny lafiny iray izay hividianan'ny mpanjifa azy.
Voafaritra ho toy ny fiatrehana ny fiovana tsy azo antoka, ny fiovaovana ny fiverenana, na ny mety ho kely noho ny fiverenana ho avy.
Raha ny forex commerce, ny mpivarotra dia mila mahazo antoka fa tsy mitaky vola bebe kokoa noho ny vola vola natokana ho an'ny varotra. Ny kapitalin'ny risika dia manondro ny habetsahan'ny mpivarotra iray mahazo aina amin'ny fampiasana vola rehefa mandoa vola amin'ny mpivarotra vola.
Heverina ho toy ny famakafakana ny tsenan'ny lozam-pifamoivoizana sy ny famoahana ny mety ho fatiantoka mety hitranga amin'ny fampiasam-bola, amin'ny fampiharana ireo teknikan'ny varotra izay mety hanampy amin'ny fametrahana ny risika amin'ny fampiasam-bola.
Ny tahan'ny risika dia teny ampiasaina amin'ny saram-panafahana na ny sandan'ny sandam-bola izay ampiasaina hanonerana ny antoko iray amin'ny fananganana risika manokana.
Raha misy toerana voatazona mandritra ny alina, ary ny fahalinana dia mitranga izay mety handoavan'ilay mpanjifany na hahazo ny toerana malalaka, miankina amin'ny tahan'ny zanabola mifandray aminy. Ny FXCC dia handoa vola na hanomezany ny kaonty mpanjifa arakaraka ny fahasamihafana amin'ny tahan'ny zanabola eo amin'ny vola fototra sy ny lozam-pifaneraserana ary ny fitarihana ny toerana misy ny mpanjifa. Ohatra; raha toa ny mpanjifa dia lavitry ny vola raisina satria ny tahan'ny lany ho an'ny vola fototra dia ambony noho ny vola vahiny, ny mpanjifa dia mahazo vola kely ho an'ny toerana voatazona mandritra ny alina. Raha toa ka misy ny toe-javatra mifanohitra amin'izany, ny kaonty mpanjifa dia handoa vola amin'ny fahasamihafan'ny fari-pahaizan'ny zanabola. Raha toa ny mpanjifa iray lavitry ny vola avo lenta kokoa, dia tokony handray soa amin'ny fahafahana mampiasa vola sy hahazo fiverenana ambony kokoa mihoatra noho ny tsy maintsy handoavana ny vola miditra ambany kokoa.
Mitantana toerana iray
Voafaritra ho toy ny fihetsika mihazona toerana misokatra malalaka, eo am-piandrasana ny tombotsoa azo raisina.
Safe Haven vola
Amin'ny fotoan-tsakafo ara-barotra na ny korontana ara-jeopolitika, ny fampiasam-bola izay novinavinaina mba hitazonana na hampitomboana ny sandany dia antsoina hoe 'Safe Haven'.
Dia Transaction Day
Voafaritra ho toy ny fifanakalozam-bola izay mihamatanjaka amin'ny andro handraisana ny raharaham-barotra.
Voafaritra ho tetika ampiasaina amin'ny fanovana kely amin'ny vidiny. Ny mpivarotra dia afaka mahazo tombontsoa amin'ny fanokafana sy famaranana ny isa maromaro avy amin'ny fivarotana varotra.
amidio Aza dia
Izany dia manondro ny vidiny ambany indrindra izay ahafahana mivarotra ny vola fototra amin'ny mpivarotra vola. Fomba hivarotra ny tsena amin'ny vidiny izay mihoatra ny vidin'ny amin'izao fotoana izao.
Ny fividianana fijanonana dia ny lozam-pifamoivoizana napetraka eo ambany latsaky ny vidin-tsolika amin'izao fotoana izao ary tsy mavitrika raha tsy eo ny vidin'ny vidin-tsolika, na ambany ny vidin'ny fijanonana. Mividy ny baiko mialoha, indray mandeha, tonga lasa tsena amin'ny fivarotana amin'ny vidin'ny tsena ankehitriny.
Io no fivarotana vola izay tsy tompon'ny mpivarotra.
Ity no daty izay tokony hametrahana ny baiko voavono amin'ny alàlan'ny famindrana fitaovana, na vola ary vola eo amin'ny mpivarotra sy ny mpivarotra.
Miankina amin'ny fametrahana toerana misokatra izay noforonina tamin'ny fivarotana vola.
Izany dia mitranga rehefa misy ny lozam-pifamoivoizana eny an-tsena ary voafaritra fa ny fahasamihafana eo amin'ny vidiny andrasana sy ny vidiny izay hita eny an-tsena ary nampiasaina hanatanterahana ny varotra. Tsy voatery ho ratsy foana ny fisotrosotroana, ary miaraka amin'ny FXCC ny mpanjifa dia afaka mahatsapa fifandonana tsara, fantatra ihany koa amin'ny fanatsarana ny vidiny.
Society of World Banking Interbank Financial Services (Swift).
Ny famindrana vola sy ny hetra ara-bola hafa dia vita amin'ny Swift, satria sehatra fifandraisana amin'ny fifanakalozana ara-bola.
Ny fisehoan-javatra raha misy mpivarotra bebe kokoa noho ny mpividy, izay mitarika ho amin'ny vidiny ambany noho ny ambim-bovam-be amin'ny fangatahana.
Mpanjifa vola vahiny
Raha manana traikefa ampy sy fahalalana momba ny tsena fifanakalozana vahiny ny mpampiasa, dia andrasana handinika ny loza mety hitranga amin'ny fampiasam-bola.
Antsoina hoe risika ny governemanta raha tsy afaka ny tsy handoa trosa ny governemanta.
Ny fifanakalozana, ohatra, ny fifanakalozana fifanakalozana dia fanombantombanana; Tsy misy antoka fa ireo mpampiasa vola ao amin'ny FX dia handray soa avy amin'ilay traikefa. Ny mpividy dia afaka mamoy ny tebitebony rehetra nafoy, ka mahatonga ny varotra FX hipoitra be. Ny fifanakalozana fifanakalozana fifanakalozana vola vahiny dia tokony haka ny kapitalina izay heverina ho kapitalisma, izay faritana amin'ny vola izay raha tsy manova ny fomba fiainan'ny mpanjifa, na ny fiainan'ny fianakaviany raha very.
Ny fisehoan-javatra ao amin'ny tsena Forex dia voafaritra ho fihetsika tsara na ratsy ao amin'ny hetsika fihenam-bidy, izay matetika tsy maharitra.
Ny tsena Spot dia nanamboatra fitaovam-pifanakalozam-bola ho an'ny vola ara-barotra tsy ara-drariny ary avy hatrany dia alefa ny baiko, satria tsy mandray na manome ny vola ara-bola ataon'izy ireo ny mpandray anjara amin'ny tsena.
Vidin'ny vidin'ny vidiny
Izy io no vidin'ny fitaovana izay azo amidy na novidina teo amin'ny tsena.
Fitsaboana marimaritra iraisana amin'ny fametrahana fifanakalozana fifanakalozam-bola amin'ny fifanakalozam-bola amin'ny alàlan'ny datim-pifanakalozan-kevitra androany 2 mialohan'ny datin'ny varotra.
Ny fahasamihafana eo amin'ny vidin'ny nomerao ho an'ny filaminana avy hatrany (mangataka sarany) sy mivarotra mivantana (vidin'ny vidiny) ho an'ny mpivady.
Olana ara-toekarena ao amin'ny firenena izay misy ny fiakaran'ny vidim-piainana miaraka amin'ny olana amin'ny tsy fisian'ny asa tsy an'asa, miteraka ny fitomboana ara-toekarena sy ny fitomboan'ny vidin-tsolika.
Ny fepetra tsy misy ny toerana malalaka ary ny fifantenana sy ny varotra ny mpanjifa dia mifandanja.
Lozam-pifanarahana amin'ny sehatra fifanakalozana ara-toekarena, dia mitovy amin'ny singa 100,000 ao amin'ny vola fototra amin'ny mpivarotra vola forex. Ny isa maromaro dia iray amin'ireo loka telo malaza maro, ny roa hafa dia: mini-lot sy micro-lot. Ny singa maromaro dia singa 100,000 amin'ny paosin-tsolika iray, ny mini-lot dia maneho ny 10,000, ny micro-lot dia manondro ireo singa 1,000 amin'ny vola. Ny hetsika iray amin'ny pipo ho an'ny laharana estanda dia mifanaraka amin'ny fiovana $ 10.
Ny sterilization dia faritana ho karazana politika, izay ahafahan'ny banky foibe mametra ny fiantraikan'ny fidiram-bola sy ny fandaniana vola amin'ny vola fanampiana ara-bola. Ny fanamafisana dia mitaky ny fividianana na fivarotana ny fananana ara-bola amin'ny banky foibe, fanimbana ny vokatry ny fifanakalozam-bola vahiny. Ny dingam-pihetseham-po dia manipulerany ny sandan'ny vola ananan'ny firenena raha oharina amin'ny hafa, izany dia atomboka amin'ny tsena fifanakalozana vahiny.
British pound, fantatra amin'ny anarana hoe cable raha manao ny mpivarotra vola GBP / USD.
Ny Stochastic (Stoch) dia manandrana manitsy ny vidiny amin'ny isan-jato eo amin'ny 0 sy 100. Amin'ny tsipika stochastic, misy tsipika roa totoina, ny haingo sy ny tsipika mahitsy stochastic. Izany dia endri-tsoratra ara-teknika mielanelana ampiasain'ny mpivarotra mba hanamafisana ny firoboroboan'ny fironana.
Izany dia baiko manokana napetraky ny mpanjifa hanidy ny toerana raha toa ka mandroso amin'ny làlana mifanohitra amin'ny toerana ny vidiny amin'ny ampahany maromaro. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra dia manakana ny fatiantànana ny fatiantoka raha vao tonga ny tsena, na mandeha amin'ny ambaran'ny paikady. Raha vantany vao navoaka, ny didim-pitsarana dia hajaina mandra-piverin'ny vidin'ny fijanonana. Ny fandefasana baiko dia azo ampiasaina hanakanana toerana iray (hampiatoana ny fatiantoka), hanodinana toerana iray, na hanokatra toerana vaovao. Ny fampiasana fomba amam-panao mamaivay indrindra dia ny fiarovana ny toerana misy azy (amin'ny famerana ny fatiantoka, na ny fiarovana tsy misy tombony). Raha vantany vao mihazakazaka ny tsena, na miditra amin'ny vidin'ny fijanonana, ny lamandy dia mavitrika (triggered) ary ny FXCC dia hamoaka ny baiko amin'ny vidiny manaraka. Ny fijanonan'ny baolina dia tsy manome antoka ny famonoana amin'ny vidin'ny fijanonana. Ny fepetra ara-barotra, anisan'izany ny volatility sy ny tsy fisian'ny volam-bahoaka, dia mety hiteraka baiko mijanona amin'ny vidiny hafa noho ny baiko.
Ity dia faritana amin'ny vidin'ny mpividy iray izay miditra amin'ny vidiny izay mampihetsika ny lozam-pifamoivoizana.
Raha ao anatin'ny toekarena dia misy endrika tsy maharitra ny tsy fananana asa, dia antsoina hoe Fiarovan'ny rafitra izy io. Ny antony dia noho ny fiovan'ny fototra ara-toekarena vokatry ny toe-javatra samihafa, toy ny teknolojia, fifaninanana ary ny politikan'ny governemanta.
Izy ireo dia ampiasaina amin'ny fanadihadiana ara-teknika mba hampisehoana ny haavon'ny trano iray izay hijanonan'ny vidiny ho sarotra ny handika sy hanitsy ny tenany.
Ny fifanakalozana ara-bola dia ny fandefasana simultaneous sy ny fampindramam-bola mitovy amin'ny vola atokana miaraka amin'ny tahan'ny fifanakalozan-kevitra.
Fafao / mamafa
Raha misy mpanjifan'ny FXCC manana P / L amin'ny vola hafa ankoatra ny dolara amerikana, ny P / L dia tsy maintsy miova amin'ny faran'ny androm-pivarotana rehetra amin'ny dolara amerikana, amin'ny tahan'ny fifanakalozana amin'ny fotoana (fantatra amin'ny hoe ny tahan'ny fihenam-bidy ). Ity dingana ity dia antsoina hoe mamafa. Hatramin'ny hamafàna ny P / L, ny sandan'ny kaonty mpanjifa dia mitombo kely (kely na ambany), ho an'ny fifanakalozana vola amin'ny tombony sy ny fatiantoka ary ny fiovan'ny vola. Ohatra; Raha manana tombony ny mpividy, raha toa ka mihidy ny sandan'ny yen rehefa mihidy ny toerana, nefa alohan'ny hidirany amin'ny dolara dia tsy hiova ny lanjany. Ny fiovana dia amin'ny tombony fotsiny ihany, noho izany dia kely ny vokatra.
Ny fikambanana ho an'ny Banky iraisam-pirenena Interbank dia orinasa iray monina any Belgique izay manome ny tambajotra elektronika maneran-tany ho an'ny fametrahana ny fifanakalozana trosa maro. Ny fiaraha-monina koa dia tompon'andraikitra amin'ny fanamarinana ny fehezan-dalàna mifandraika amin'ny fanamafisana sy ny famantarana (ie USD = Dollars amerikana, EUR = Euro, JPY = Japoney Yen)
Ity dia dikan-tsoratry ny tetikady ara-barotra momba ny varotra mitazona toerana iray misokatra amin'ny iray (hatramin'ny andro maromaro) amin'ny ezaka handoavana ny fiovan'ny vidiny, izay matetika antsoina hoe 'swing'.
Jirama ho an'ny Franc Swiss, CHF.
Makà rindrambaiko mahasoa
Fepetra napetraky ny mpanjifa amin'ny vidiny efa voafaritra mialoha ny vidin'ny vidin-tsolika, dia hikatona ny baiko. Raha vao vita ny baiko, dia miteraka tombony amin'ny varotra izany.
Ny fanadihadihana ara-teknika dia mampiasa ny fironana ara-toekarena sy ny lozam-pamokarana amin'ny fanandramana handrafetana ny vidiny.
Voafaritra fa ny fisian'ny tsena ny vidin'ny vidin-tsolika raha tsy misy antony fototra mahatonga ny fatiantoka. Ohatra iray ny hoe rehefa miverina amin'ny laoniny ny vidiny rehefa avy nipaka izany.
Ny fifandraisan'ny sandan'ny sandam-bola sy ny vidin-tsolitany.
Ny fampiasana teknika dia ampiasaina ho toy ny ezaka haminavina ny fivoaran'ny tsena amin'ny hoavy. Ampahany manan-danja amin'ny fanadihadiana ara-teknika ampiasaina ho toy ny lamin-teti-taratasy ary natao mba handinihana ny hetsiky ny vidin-javatra amin'ny fotoana fohy.
Izy io dia faritana ho tsena izay tsy ahitana mpivarotra sy mpividy maro, izay tsy dia manana volabe ara-barotra sy vokatra ara-bola be dia be.
Ity dia faritana amin'ny fiovaovan'ny fiovam-po faran'izay kely, na ambony na ambany.
Rahampitso manaraka (Tom manaraka)
Rahampitso manaraka dia misy ifandraisany amin'ny toerana nakatona tamin'ny andro fiasana iray manokana tamin'ny faran'ny fitokonana ary avy eo namoha ny andro manaraka. Ny famafazana dia roa (2) andro aorian'ny daty tratrany. Io no fividianana sy fivarotana vola amin'ny fotoana iray mba hisorohana ny famotsorana ny vola.
Hanaraka ny rakitsoratra
Ny tantaranà fahombiazana ara-barotra, matetika no faritana amin'ny toeran'ny sanda.
Io no daty hanaovana ny varotra.
Misy ny tsy fahampiana ara-barotra raha misy ny importante amin'ny firenena noho ny fanondranana. Izany dia fepetra ara-toekarena momba ny fifandanjan'ny fifanakalozana ara-barotra ary manasongadina ny vola miditra amin'ny vola miditra any ivelany.
Ny fividianana na fivarotana ireo entana, serivisy ary fitaovana miaraka amin'ny antoko hafa. Ny fifanakalozana ara-barotra dia azo faritana amin'ny fiheverana ny fiovan'ny tahan'ny vola vahiny.
Tranombarotra momba ny varotra koa dia fantatra amin'ny anarana hoe 'peta-drindrina'. Any no misy ny fivarotana fivarotana sy fividianana ary azo jerena ao amin'ny banky, orinasam-bola, sns. Afaka manome mpivarotra amin'ny fanatanterahana ny baikony tsy tapaka izy ireo.
Fampiharana rindrambaiko izay ahafahan'ny mpanjifany manome baiko hampihatra ny fifanarahana amin'ny anaran'ny mpanjifa. FXCC-MT4 (MetaTrader 4) dia ohatra iray amin'ny sehatra varotra.
Ny fijanonan'ny fandefasana dia ampiasaina mba hiarovana ny fandrosoana azo avy amin'ny varotra manokana, amin'ny fihazonana ny varotra misokatra ary mamela ny fitohizan'ny tombony amin'ny tombony raha toa ka mihetsiketsika ny loka. Tsy voafetra amin'ny vola tokana izy io, fa voatondro maromaro.
Izany dia mividy, na mivarotra, ohatra, volan'ny fifanakalozana vokatry ny famonoana didy.
Izany no vidin'ny mividy na mivarotra fitaovana ara-bola.
Ity no daty nipoiran'ny varotra.
Raha mandray anjara amin'ny varotra iraisam-pirenena ny orinasa, ny loza atrehin'izy ireo dia ny fanondranana tranainy, raha toa ka miova ny tahan'ny fifanakalozana rehefa niditra ny volavolan-dalàna.
Ny fitaratry ny tsena na ny vidiny, matetika mifandraika amin'ny teny hoe: "mahasoa, ny orinasa, na ny aty" (mandroso) ary mety ho fohy, maharitra na fironana mivantana.
Ity dia endrika fanadihadiana ara-teknika (endri-tsoratra), izay antsoina koa hoe firindran'ny tsimokaretina. Ireo rindran-damina dia afaka miasa toy ny fitaovana tsotra statistika, mamantatra ny fironana amin'ny alalan'ny famolavolana ny tsipika mahitsy indrindra manerana ny: ambany, avo indrindra, na ny famaranana sy ny vidin-javatra fanokafana.
Ny fiverenana dia mitovitovy amin'ny famaritana ny volavolan-dalàna ary maneho ny sanda ara-bola rehetra amin'ny fifandraisan-davitra rehetra natao tao anatin'ny fe-potoana voafaritra.
Io no teny manondro ny fisaorana ary mangataka loka amin'ny tsena fifanakalozana vahiny.
Teny iray ho an'ny toerana misokatra.
Under Under Valuation
Raha toa ny tahan'ny fifanakalozam-bola ho an'ny vola dia ambany noho ny fividiananam-pahefana, dia heverina ho tsy mendrika.
tahan'ny tsy fananana asa
Ny isan-jaton'ny herin'ny asa izay tsy miasa intsony amin'izao fotoana izao.
Izany dia fehezan-teny ho an'ny tombombarotra na ny fatiantoka ara-potoana atolotra amin'izao fotoana izao. Ohatra, raha manapa-kevitra ny handefa vola amin'ny paosiny manokana ny mpanjifany, dia mila mivarotra amin'ny vidin'ny vidiny izy ary ny P / L mbola tsy voalamina dia mihazona mandra-pikatonan'ny toerana. Raha vantany vao mihidy ny P / L dia hampidirina na hampiarahana amin'ny vola sisa tavela amin'ny fametrahana, mba hahazoana ny vola vaovao amin'ny taham-bola.
Ity no teny ofisialin'ny vidiny vaovao izay avo indrindra amin'ny vidiny mifanohitra amin'ilay teny teo aloha.
Ny tahan'ny zanabola ampiasain'ny banky Amerikana hampindramina ny mpanjifany na ny mpivarotra orinasa.
Ity ny fampitam-baovao ara-dalàna an'i Etazonia Amerikana, solontenan'ny vola USD raha mitarika fifanakalozam-bola vahiny.
Ny tahirim-bola dollar (USDX) dia mandrindra ny lanjan'ny dolara amerikana mifanohitra amin'ny sandan'ny haran-karama avy amin'ireo mpiara-miombon'antoka ara-barotra ao Etazonia. Amin'izao fotoana izao, ity mari-pamantarana ity dia novolavolaina tamin'ny fanadihadiana amin'ny fifanakalozana vola amin'ireo enina lehibe erantany: ny euro, yen Japoney, dolara kanadiana, britanika britanika, krona Swedish ary franc Swiss. Ny euro dia manana ny lanjany be indrindra amin'ny dolara amin'ny endriny, mamorona 58% amin'ny sandan'ny weighting, arahin'ny yen amin'ny manodidina ny 14%. Ny fanombohana dia nanomboka tao amin'ny 1973 miaraka amin'ny fototra 100, ny soatoavina hatramin'izay dia mifandraika amin'io fototra io.
Modely arahin'ny mpandinika ara-teknika, izay ahitàna azy ho toy ny mari-pamantarana fanodikodinana.
Io no daty ifanakalozana ny fifanakalozam-bola amin'ny mpivarotra ara-bola. Ny daty matotra ho an'ny fifanakalozana fifanakalozam-bola dia amin'ny ankapobeny (2) andro iraisam-barotra avy amin'ny fotoana nisokatra ny toerana.
VIX dia marika famantarana ny CBOE Volatility Index, volavolan-dalan'ny volavolan-damosin'ny safidy index SPX; Ny VIX dia novolavolain'ny Chicago Board Options Exchange (CBOE). Raha avo lenta ny famakiana VIX dia mino ny mpampiasa sy ny mpivarotra fa ny fiakaran'ny varotra dia avo; fa ny tsenam-bola madinika dia mety mandritra ny vanim-potoan'ny tetezamita. Ny VIX dia manome antsika telopolo andro mialoha ny fialan-tsasatry ny hetsika isan-taona ao amin'ny SPX. Ohatra, ny famakiana ny 20% dia mety hanantena ny hetsika 20%, miakatra na midina, mandritra ny roa volana manaraka.
Voafaritra ho fepetra amin'ny vidin'ny fluctuation, izay azo refesina amin'ny fampiasana ny fihoaram-pahefana na ny fifanoherana eo anelanelan'ny fiverenan'ny fitaovana iray.
Fanombanana ny totalin'ny fivarotana varotra manokana: ny vola, ny mpivady vola, ny entana, na ny index. Indraindray dia heverina ho toy ny totalin'ny fifanarahana natao varotra nandritra ny andro.
Voafaritra ho "server tsy miankina virtoaly". Ny fidirana mivantana amin'ny serivisy iray alefa, izay ahafahan'ny mpivarotra mandrindra sy manatanteraka ny EAs amin'ny alàlan'ny kaonty, ka ahafahana manao raharaham-barotra 24 / 5 amin'ny faran'ny fandaniana, tsy mila mampiasa ny ordinatera manokana. Ny serivisy amin'ny FXCC dia nomen'ny BeeksFX.
Karazana fandrefesana boribory
Ity lamina ity dia manondro ny fiovan'ny fironana iray, izay miorina ao anatin'ny seza. Ny kodiarana dia mitovy amin'ny endriky ny triatra, manana fanohanana sy fanoherana. Ity lamina fakan-tsary ity dia tandindon-javatra maharitra izay mampiseho fihenam-bidy.
Voasokajy ho toy ny toetry ny tsena tsy misy vidiny, ka ny fihenan'ny vidin'ny vidin-javatra dia arahin-drivotra haingana avy eo.
Izany dia maneho ny fisehoan-javatra rehefa milevina be ny vola avy amin'ireo andrim-panjakana sy banky, fa tsy vola madinika mivantana avy amin'ireo mpampiasa vola madinika.
Index de prix de prière
Izy io no vidin'ny sari-tanin'ny solosaina sy ny fanombanana ny fiovan'ny fiovam-bola amin'ny sehatry ny famokarana sy fizarana ny toekarena. Matetika dia mitarika ny endriky ny vidin'ny mpanjifa amin'ny 60 ka hatramin'ny 90 andro. Ny sakafo sy ny indostrian'ny vidin-tsolika dia matetika voatahiry miaraka.
Andro iray izay anokafana ireo banky any amin'ny foibem-bola ara-bola ho an'ny orinasa, ohatra, ny fialan-tsasatry ny banky any Etazonia, toy ny Thanksgiving andro, dia midika fa tsy andro fiasana ho an'ireo mpivady voatonona anarana any Etazonia.
Izy io dia rafitra ara-bola iraisam-pirenena ahitana mpikambana ao amin'ny FMI izay manampy amin'ny fampandrosoana ny mpikambana ao amin'ny firenena amin'ny fanolorana fampindramam-bola izay tsy misy ny renivola tsy miankina.
Fantatra amin'ny mpandraharaha amin'ny varotra na mpivarotra vola.
Fanaovana jiolahimboto tsy dia ampiasaina firy arivo tapitrisa.
Voafaritra ho toy ny fiverenana amin'ny fampiasam-bola.
Andalana iray izay manasongadina ny tahan'ny zanabola amin'ny fotoana iray izay ahafahan'ny fitaovana manana ny kalitao mitovy, fa ny daty matotra kokoa na lava kokoa. Ampiasaina hanomezana hevitra momba ny asa ara-toe-karena andrasana amin'ny ho avy, ary koa ny fiovan'ny tahan'ny zanabola.
Taona-on-taona. Ny fatoram-bolana ampiasaina amin'ny fikajiana ny fiovaovana isan-jato amin'ny indices amin'ny vanim-potoana / isan-taona.